Nei Jennifer? - Kuverengera kuhumambo
Tora Virtual Kudzoserwa naFr. Michel Rodrigue
Jennifer amai vechidiki vemuAmerican uye amai vemba (zita rake rekupedzisira rakabatwa pachikumbiro chemukuru wake wezvemweya kuitira kuti aremekedze kuvanzika kwemurume wake nemhuri yake.) Aive, pamwe, izvo izvo munhu angadai akadana "anowanzo" weSvondo anoenda Svondo uyo aiziva zvishoma nezvekutenda kwake uye kunyangwe zvishoma nezveBhaibheri. Akafunga pane imwe nguva kuti "Sodhoma neGomora" vaive vanhu vaviri uye kuti "Mhemberero" izita reboka rerock. Zvino, panguva yeKudya kuMisa rimwe zuva, Jesu akatanga kutaura zvinonzwika kwaari achipa mashoko erudo nekuyambira achimuudza, “Mwanakomana wangu, iwe uri wekuwedzera weshoko Rangu Retsitsi. Sezvo mameseji ake anotarisa zvakanyanya kururamisiro iyo fanira huyai pasingapinduke nyika, ivo vanozadza zvirokwazvo chikamu chekupedzisira cheshoko raSt Faustina:
… Ndisati ndasvika seMutongi anotonga, ndinotanga kuvhura musuwo wetsitsi dzangu. Iye anoramba kupfuura nemusuwo wetsitsi dzangu anofanirwa kupfuura nemusuwo weruramisiro yangu…-Ngoni dzaMwari muneomweya wangu, Diary yeSt Faustina, n. 1146
Rimwe zuva, Ishe vakamuraira kuti ataurire mameseji kuna Baba Vatsvene, Papa John Paul II. Fr. Seraphim Michaelenko, mutevedzeri wemutungamiriri weSt. Faustina, akaturikira mameseji aJennifer muchiPolish. Akaverengera tikiti kuenda kuRoma uyezve, nekumwe kusawirirana, akazviwana iye nevamwe vake mumakiromita emukati meVatican. Akasangana naMonsignor Pawel Ptasznik, shamwari yepedyo uye anoshanda naPapa nePolish Secretary of State of the Vatican. Iwo mameseji akaendeswa kuna Cardinal Stanislaw Dziwisz, John Paul II secretary chaiye. Mumusangano wekutevera, Msgr. Pawel akati, "Paridza meseji pasirese nzira yaungagone."
Mharidzo kubva kuna Jennifer
Jennifer - Makomo Achamuka
Nyika iri kupindura zvivi zvako ...
Jennifer - Huya uye Unamate
Ndinozorora muuthende hwenyika chinyararire.
Jennifer - Mazuva ekuchema achauya
...asi zvichateverwa nekukunda kukuru.
Jennifer - Kudana Kunamatira Vasina Kugadzirira
Namatira kuchengetedzwa kwemhuri.
Jennifer - Anopesana naKristu Ari Pedyo
Rusununguko rwako ruchatorerwa...
Jennifer - Mazuva ekuchema kukuru ari kuuya
Vana mai nanababa vachashuva nekuchema vana vavo...
Jennifer - Nyika Ichaputirwa neMvura
... nemisodzi kana vanhu vaona zvavakaitira vadiki ...
Jennifer - Ini Handisi Mwari wekutya
Muviri wako itembere yeMweya Mutsvene.
Jennifer - Mhepo dzeChirimo
Chiporofita chiri padhuze?
Jennifer - Varipi Vapristi Vangu?
Vazhinji vakavimba nesainzi yemunhu.
Jennifer - Awa Iri Kuuya
Iyo awa apo vanhu pavachaona chokwadi chemweya wake.
Jennifer - Beads of Light
Rozari ichabaya rima.
Jennifer - Kusheedza Vaporofita
Jennifer - A New Corridor muNguva
Kuzunungusa kukuru uye kuverenga ropa revasina mhosva.
Jennifer - Iyo Webhu Ichaparadzwa
Rusununguko runopihwa kuita Kuda kwaMwari.
Jennifer - Uripiko Kuvimba Kwako?
Uri kunditsaura wega here kana kuti iwe pachako?
Jennifer - Iyo Shadows yeRussia neChina
Jennifer - Kudengenyeka Kwakakura
Awa Huru yechiedza iri kuuya.
Jennifer - Chiratidzo cheYambiro
Vachaona mweya yavo sezvandiri kuzviona.
Jennifer - Iko Kururamisa kukuru kuri kuuya
Rudzi rwevanhu haruchakwanise kuvanda.
Jennifer - Hapasisina Nguva
Rudzi rwevanhu rwarasikirwa nekuziva zvivi.
Jennifer - Vana Vangu Vanorwira Rudzi
Haisi iyo ruvara rweganda rinokonzera kuparadzaniswa: icho chivi.
Jennifer - Muka Vana Vangu!
Wapinda muGetsemane yako.
Jennifer - Kururamisa Kwakakura Kunouya
Kana Tsitsi dzangu dzisisiri kutsvakwa saka kururamisira kunofanira kuuya.
Jennifer - Kuburitswa Kwatanga
Kudedera kukuru kuri kuuya.
Jennifer - Pane Vapoteri
Ndiri kudaidza vana Vangu kuti vatizire kuMwoyo Unoyera Zvitsvene, nekuti ndipo chete paunowana utiziro.
Jennifer - Nguva yeRunyararo
Jesu kuna: Mwana wangu, ndatumira madutu uye kudengenyeka kwenyika ino isati iri chiratidzo chinodikanwa nemurume ...
Jennifer - Matambudziko eZvipembenene uye Zvirwere
Jesu kusvika, Mbudzi 18, 2004: Vanhu vangu, mwenje uchauya uye unowira pamusoro pevanhu. Rutivi rumwe nerumwe rwechiedza icho ...
Jennifer - SemaBoxcars
Jesu ku: Vanhu vangu, avo pakati penyu vanoramba vasingateerere kuteterera Kwangu vachakurumidza kuunzwa pamabvi ako ...
Jesu kuti:… kudedera kukuru kuri kuda kuuya nekuti pasi ratanga kuratidza vanhu kudzika ...
Posted in Messages, Nei muoni iyeye?.
← Nei Gisella Cardia?
Nei Elizabeth Kindelmann? →
Mamiriro akasiyana chete chete
Muchiitiko chekuti Big Tech ikativhara, uye iwe ungade kugara wakabatana, ndokumbirawo uwedzere kero yako, iyo isingazombogoveranwa.
Mweya Usinga fungidzike
Tora kudzokerwa chaiko naFr. Michel Rodrigue
Luz of Maria of Bonilla
Muranda waMwari Luisa Piccarreta
Kubva Kune Vatinopa
Kudzivirirwa Panyama uye Kugadzirira
Kudzoka Kwesimba raSatani
Mazuva matatu erima
Yambiro, Kudzokorora, Chishamiso
Nei muoni iyeye?
Kudzinga mweya yetsvina
Majekiseni, Madenda uye Covid-19
Zvisimbiso zvinomwe zvaZvakazarurwa
Pedro – Vana Vangu Varombo Vachaita Nzara January 21, 2022
Gisella - Kutambudzwa Kuchave Kwakanaka January 21, 2022
Valeria - Nyika Yako Yave Satanic Ground January 20, 2022
Pedro – Usabve muChechi January 17, 2022
The Tolls (yakagadziridzwa Ndira 14, 2022) January 17, 2022
Jennifer - Makomo Achamuka January 15, 2022
Anopesana naKristu Kuramba kutenda Katolika kurangwa Kuranga chechi communism kureurura kuvhiringidzika kupinduka Coronavirus Covidien-19 kunyengera kupesana Era rerunyararo Chidyo kutenda Kujekeswa kwehana Mumoyo Unofunga Jesu kururamisira kurwadziwa nemimba rudo Mary Amai pandemic Kutambudzwa papa munamato vapristi uporofita yokuzvinatsa utiziro kutendeuka rozariari sakaramende miedzo Kutambudzika Triumph kuvimba chokwadi vaccine kukunda hondo yambiro
Terms uye Mamiriro uye zvakavanzika Policy
Webhusaiti dhizaini na tiDesign © 2022
A SiteOrigin dingindira
Nei mweya weCalifornian?
Kunenge gore ra1997, murume nemukadzi muCalifornia, avo vaigara pamwechete muhupenyu hwezvivi, vane shanduko yakadzama kuburikidza neTsitsi dzaMwari. Mudzimai akange akurudzirwa mukati kuti atange boka yerosari mushure mekusangana kwake kwekutanga Divine Mercy novena. Mwedzi minomwe gare gare, chifananidzo cheNye Mukadzi weMutaka Pasinei Nemo mumba mavo chakatanga kuchema mafuta zvakanyanya (gare gare, zvimwe zvidhori zvinoera uye mifananidzo yakatanga kuyerera mafuta anonhuwirira pamuchinjiko uye chifananidzo cheSt Pio chakadeurwa. parizvino akaturika muMarian Center iri pa Divine Divine Shrine muMassachusetts .. Nekuti mifananidzo iyi yakatanga kukwezva vanhu vazhinji kumba kwavo pakutanga, director wavo wekunamata akabvuma kuti varambe vasingazivikanwe). Ichi chishamiso chakavatungamira kuti vatendeuke kubva kwavo kurarama uye kupinda muchirairo chesakaramende.
Anenge makore matanhatu gare gare, murume akatanga zvinonzwika kunzwa izwi raJesu (izvo zvinonzi "nzvimbo"). Aive asina kana katekisisi kana kunzwisisa kweKutenda kweKatorike, saka izwi raJesu rakavhunduka nekumubata. Kunyangwe hazvo mamwe mazwi aIshe aive eyambiro, akarondedzera izwi raJesu serakanaka nguva dzose uye rakapfava. Akatambirawo kushanyirwa kubva kuSt. Pio nenzvimbo kubva kuSt Thèrèse de Lisieux, St. Catherine weSiena, St. Michael Mutumwa mukuru uye nenzvimbo dzakawanda kubva kuna Mai Vedu vari pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa. Mushure mekuburitsa makore maviri emeseji nezvakavanzika (zvinozivikanwa chete nemurume uyu uye kuti zviziviswe munguva inotevera inongozivikanwa naIshe chete) zviwanikwa zvakamira. Jesu akaudza murume uya, “Ndichagumisa kutaura newe izvozvi, asi Mai Vangu vacharamba vachikutungamira."
Vaviri ava vakanzwa kudaidzwa kuti vatange cheni yeMaryan Movement yeVaprisita kwavaizofungisisa nezvemitemo yeLady Lady kuenda	Fr. Stefano Gobbi . Paive makore maviri mune aya masenitini kuti mazwi aJesu akazadzika: Mukadzi wedu akatanga kumutungamira, asi nenzira inoshamisa kwazvo. Munguva yezvivakwa, uye pane dzimwe nguva, murume uyu aiona “mumhepo” pamberi pake nhamba dzemashoko kubva kune uya anonzi "Bhuruu Bhuku,”Kuunganidzwa kwezaruriro dzakapihwa naMai vedu	Fr. Stefano Gobbi , "Kune Vaprisita Vanodiwa Navana Vedu."
Vaviri murume nemukadzi vanotambura zvakanyanya nekuda kweshumiro yavo, asi nguva dzose vape kuna She kuponeswa kwemweya. Zvinokosha kuti murume uyu adaro kwete Verenga Blue Book nanhasi (sezvo dzidzo yake ishoma uye aine hurema hwekuverenga). Kwemakore, idzi nhamba dzakapfeka dzaizosimbisa pazviitiko zvisingaverengeke kutaurirana kwakangoitika mune yavo cenacles, uye ikozvino nhasi, zviitiko zviri kuitika kutenderera pasirese. Fr. Meseji dzaGobbi hadzina kukundikana asi izvozvi dzave kuwana kuzadzikiswa kwavo munguva chaiyo.
Pese panenge paine iwo ma meseji kuCustomdown kuHumambo, tichaita kuti vawanikwe pano.
Wakavanzika wechiPolish, Alicja Lenczewska, akaberekerwa muWarsaw muna 1934 uye akafa muna 2012, hupenyu hwake hwehunyanzvi hwuchishandiswa zvakanyanya semudzidzisi uye mubatsiri director wechikoro kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweguta reSzczecin. Pamwe chete nemukoma wake, akatanga kutora chikamu mumisangano yeCatholic Charismatic Renewal muna 1984 zvichitevera kufa kwamai vavo. Musi waKurume 8, 1985, hupenyu hwaAlicja hwakashanduka zvakanyanya paakasangana naJesu akamira pamberi pake mushure mekugamuchira Chirairo Chitsvene. Paive musi uyu paakatanga kurekodha nhaurirano dzenhema. Achirega basa muna 1987, akazova nhengo yeMhuri yeMoyo weRudo rwevakarovererwa, achiita mhiko dzake dzekutanga muna 1988 uye nemhiko dzisingaperi muna 2005. . Muna 2010, kutaurirana kwake kunoshamisa kwakasvika kumagumo, makore maviri asati afa nekenza muSt. John's Hospice, Szczecin, muna Ndira 5, 2012.
Ichimhanyira kumapeji anodarika 1000 akadhindwa, bhuku raAlicja rine mavhoriyumu maviri ezvomweya (Testimony (1985-1989) uye Exhortations (1989-2010) rakaburitswa mushure mekufa, nekuda kwekuedza kwaAbhishopi Mukuru weSzczecin, Andrzej Dzięga, uyo akatanga komisheni yezvouMwari. kubva pakuwongorora zvinyorwa zvake, izvo zvakapihwa Imprimatur naBishop Henryk Wejman.Kubvira pavakaonekwa muna 2015, vava ivo vatengesi vepamusoro pakati pevaPolish Katurike uye vanowanzodzokororwa paruzhinji nevafundisi zvese nekuda kwekunzwisisa kwavo kwehupenyu hwepamweya uye zaruriro yavo maererano nenyika yanhasi.
Mumwe murume wekuchamhembe kweAmerica, uyo anoda kuramba asingazivikanwe, uye watichati Walter, aive anonzwika zvine ruzha, achizvitutumadza, uye akasekesa kutenda kweKatorike, kunyangwe kusvika pakubvarura rozari yamai vake pamaoko ake ekunamata nekuvaparadzira. kuyambuka pasi, kwakapfuura neshanduko yakadzama.
Rimwe zuva, shamwari yake uye waaishanda naye, Aaron, uyo anga achangobva kutendeuka muMedjugorje, akatambidza Walter bhuku raMary's Medjugorje mameseji. Achivatora kuenda naye kuKathedral of the Blessed Sacrament panguva yake yekuzorora kwemasikati kubva kubasa kwake seye real-broker broker, akavadya uye nekukurumidza akazove mumwe murume akasiyana.
Nguva pfupi yapfuura, akazivisa kuna Aaron, “Pane sarudzo yandinofanira kutora muhupenyu hwangu. Ndinofanira kusarudza kana ndichifanira kupira hupenyu hwangu kuna Mai vaMwari. ”
"Zvakanaka, Walter," Aaron akapindura, "asi i9 am, uye tine basa rekuita. Tinogona kuzotaura nezvazvo gare gare. ”
"Kwete, ndinofanira kuita sarudzo izvozvi," uye Walter akabva aenda.
Kwapera awa, akadzokera muhofisi yaAaron achinyemwerera pachiso chake ndokuti, "Ndazviita!"
"Ndakatsaurira hupenyu hwangu kuna Mai Vedu."
Saka zvakatanga kushamisika naMwari naMukadzi Wedu izvo Walter angadai asina kumbofungidzira nezvazvo. Walter paaityaira achienda kumba achibva kubasa rimwe zuva, kunzwa kwakanyanya muchipfuva chake, sekurwadzisa kwechironda kusingakuvadze, kwakamukurira pakarepo. Kwaive kunzwa kwekunakidzwa kwakasimba zvekuti akafunga kana acharwara nemoyo, saka akabva abvisa mugwagwa. Akabva anzwa izwi raakatenda kuti ndiMwari Baba: "Amai Vakaropafadzwa vakusarudzai kuti mushandiswe sechiridzwa chaMwari. Ichakuunzira miedzo mikuru nekutambudzika kukuru. Unoda here kugamuchira izvi? ” Walter aisaziva kuti izvi zvairevei - chete kuti aibvunzwa kuti ashandiswe neimwe nzira sechiridzwa chaMwari. Walter akabvuma.
Pasina nguva mushure meizvozvo, Mukadzi Wedu akatanga kutaura kwaari, kunyanya mushure mekunge agamuchira Chirairo Chitsvene. Walter ainzwa izwi rake kubudikidza nekushongedzwa kwemukati - mumazwi akajeka kwaari seake - uye akatanga kumutungamira, kumuumba, nekumudzidzisa. Pasina nguva Mukadzi Wedu akatanga kutaura kuburikidza naye kuboka rekunamatira vhiki nevhiki iro rakakura nekukura.
Zvino aya mameseji, ayo anokurudzira, kuumba, kupokana uye kusimbisa vakatendeka vakasara venguva dzino, nguva yekupedzisira, varipo kune nyika. Pamwe chete, ivo vanowanikwa mubhuku: Iye Iye Anoratidza Iyo Nzira: Mharidzo dzeDenga dzeNguva Dzedu Dzenhamo uye ndakanyatsodzidziswa nevapristi vanoverengeka uye vakawanikwa vasina dzidziso dzese uye vanotsigirwa nemoyo wese naArchbishop Emeritus Ramón C. Argüelles weLipa.
Nei Eduardo Ferriera?
Akazvarwa muna 1972 muItajai mudunhu reSanta Catarina kuBrazil, Eduardo Ferreira akawana mufananidzo waMukadzi wedu weAparecida muchivanze chemba yemhuri muna Ndira 6, 1983. Musi waGumiguru 12, 1987, mazuva mana mushure mekudya kwake kwekutanga, Eduardo nehanzvadzi yake Eliete vanga vachinamata pamberi peichi chifananidzo Eduardo paakaona mwenje webhuruu uchibuda mairi uye uchivhenekera mukamuri. Musi waFebruary 12, 1988 aive nechiratidzo chake chekutanga cheMhandara, achimuona kunge ari mugirosi rakazara-rosi, akabata nyoka netsoka yake. Zviratidzo zvakazoitika kanenge zuva nezuva kusvika Ndira 1, 1996, mwedzi miviri mushure mekutanga meseji kubva kuna Jesu muchipatara uko Eduardo aishanda semukoti.
Kutanga muna Kukadzi 1997 uye zvichiri kuenderera, iwo mavonero kuna Eduardo Ferreira anga achiitika nguva zhinji musi wegumi nemaviri wemwedzi wega wega uye neapo neapo pane mamwe mazuva. Panguva imwecheteyo yaakagamuchira ruzvidzo muna Kukadzi 12, 2, Eduardo akasangana nemuoni wechipiri, Alceu Martins Paz Junior (akaberekwa muna 1996), ane zviitiko zvisinganzwisisike zvaisanganisira kuona Mhandara muna Chikunguru 1977, 9. Vakomana vaviri ava. akatanga kuparidza pamwe asi akapikiswa zvakanyanya, Eduardo achityisidzirwa nerufu, kusanganisira nenhengo dzemhuri yake. Mushure menguva yaakange asina pekugara, Eduardo akazopedzisira agara muSão José dos Pinhais mudunhu reParaná mu1996, kwaanogara, uye uko kwakavakirwa nzvimbo tsvene, sezvinoonekwa mumavhidhiyo ezvemashura.
Mary anoonekwa mune aya mashura se "Rosa Mystica", zita raakazviratidza kunamukoti Pierina Gilli muMontichiari-Fontanelle (1947), chiitiko icho maratidziro eBrazil kuna Eduardo naJunior vachidzokorora kakawanda. Mashura aya akaratidzirwa nenhamba huru yezvinhu zvisinga tsanangurike izvo zvakafanana nezvinoonekwa mune mamwe masayiti akafanana: kumanikidzwa kweropa kubva pachifananidzo cheMhandara (seCivitavecchia kana Trevignano Romano), "kutamba kwezuva" (sekuFatima kana Medjugorje), mufananidzo waMaria "usingatsanangurike" mumakomba (senge muLipa muPhilippines muna 1948)… Mune meseji, tinowanawo mareferenzi kune akawanda maMarian zvimiro zvekare. Zvimwe zveizvi zvakadzingwa neChechi (Montichiari, Ghiaie di Bonate, Biding, Kerizinen…), asi zvakadaro zvakakwezva kufarira kuri kukura kune avo vatsvagiridzi vane hunyanzvi hwekumisikidza chokwadi chenhoroondo uye kugadzirisa zvinyengeri avo vanogona kunge vakapomedzerwa zvisina mhosva.
Misoro mikuru yemeseji kuna Eduardo Ferreira (vanopfuura zviuru zvisere kusvika pari zvino) inoshanduka pamwe neruzhinji rwezvimwe zvakakomba zvemazuva ano zvechiporofita. Ivo vakawana kutarisisa kwakanyanya mumwedzi ichangopfuura nekuda kweshoko refu rakagamuchirwa nemuoni muHeede, Germany mu8000, saiti yezviono kuvana vana nguva pfupi yapfuura Hondo Yenyika II. Iyi meseji, inoonekwa kanopfuura mamirioni matatu nguva paYouTube, inoita kunge yakafanotaura dambudziko riripo repasi rose rehutano.
Nei Edson Glauber?
Muna 1994, maitiro aJesu, Mukadzi Wedu, naSt Joseph kuna Edson Glauber, ane makore makumi maviri nemaviri, naamai vake, Maria do Carmo. Muna 2021, Edson akashaya kubva kurwara pfupi.
Zviratidzo zvakazozivikanwa seIpapiranga apparitions, yakatumidzwa zita reguta ravo rekuzvarwa musango reBrazil reAmazon. Mhandara Maria akazvizivisa sa "Mambokadzi weRosari uye Runyararo," uye meseji dzaiwanzosimbisa kunamatira Rosary zuva nezuva - kunyanya rozari yemhuri, kudzima terevhizheni, kuenda kuConfession, Eucharistic Adoration, simbiso yekuti " Chechi yechokwadi iChechi yeRoma Kereke yeVapositori, uye kuti "rwizi rwezvirango" rwava pedyo. Mai vedu vakaratidza denga, gehena uye purigatori kuna Edson, uye pamwe neMwanakomana wake, vakapa dzidziso dzakasiyana dzemhuri kuna Maria do Carmo.
Uyezve, Mai Vedu vakanyatsokumbira kuvhenekwa kwechiKristu kwakatungamirwa munzira yakasarudzika kune vechidiki nekuvakwa kwechirahwe chevakaperekedza, pamwe nenzvimbo yekicheni soup muIapiranga yevana vanoshaya.
Baba vaEdson, vaive chidhakwa chakadhakwa chakashandurwa nekuda kwesimba remaapparitions zvainge zvoda kuwanikwa pamabvi avo vachinamata Rosary mangwanani-ngwanani, uye Mai Vedu vakati nezvenzvimbo hombe yaive yavo. iye uye kuna Mwari. Mambokadzi weRosary akabata akabata ruoko rwake rwemvura runoyerera kubva panzvimbo yemaficha muIpapanga ndokukumbira kuti riunzwe kune vanorwara kuti vaporese. Chiverengero chikuru chekuporesa kunoshamisa kwakataurwa, kuongororwa nemachiremba, uye vakaendeswa kuApostora Prefecture yeArchdiocese yeItaacoatiara. Akakumbirawo kuti chapel ivakwe iyo ichakamira.
Muna 1997, mameseji aIpapiranga pane dzimwe nguva akasimbisa kuzvipira kuSt Joseph Kwakachena Kwazvo Mwoyo, uye Jesu akakumbira kuti Zuva raMutambo unotevera riunzwe muChechi:
Ini ndinoshuvira kuti Chitatu chekutanga, mushure meMutambo weMweya wangu Wakachena uye neMweya wekusingaperi, kuve wakakumikidzwa kumabiko eiwo akachena moyo weSt Joseph.
NeChitatu, Chikumi 11, 1997, iro zuva iro gore rechiko ichi rakakumbirwa, Amai Vakaropafadzwa vakataura zvinotevera, vachitaura nezvekutarisirwa kwemhuri dzvene kwakaitika kuGhiaie de Bonate kuchamhembe kweItari, mukati ma1940-- mavonero ekuti kuzvipira kuna St Joseph kwakawanikwidzirwazve:
Vana vanodikanwa, pandakazviratidza muGhiaie di Bonate naJesu uye St. Joseph, ndaida kukuratidzai kuti pasirese pasi rose rinofanira kuva nerudo rukuru kuMwoyo Wakachena weSt. Joseph uye kuImba Tsvene, nekuti satani vangarwisa mhuri zvakanyanya panguva yekupedzisira ino, vachidziparadza. Asi ini ndinouyazve, ndichiunza magariro aMwari, Tenzi wedu, kuti avape kumhuri dzese dzinonyanya kuda kuchengetedzwa neVamwari.
Sezvakaitika mune mamwe maapparitions eMarian, akadai saFatima neMedjugorje, Mukadzi Wedu akazivisa zvakavanzika zveEdson zvine chekuita neKutungamira kweChechi nepasirese, uye zviitiko zvakakomba zvenguva yemberi kana vanhu vasingatendeuki. Parizvino, pane zvakavanzika zvipfumbamwe: ina dzakanangana neBrazil, mbiri dzenyika, mbiri dzeChechi, uye imwe yeavo vanoramba vachirarama hupenyu hwezvivi. Mai vedu vakaudza Edson kuti vachasiya chinooneka paGomo reMuchinjiko padyo nepamhepo kuIpapanga.
Musi wa4 Gumiguru, 1996, achionekera pamberi pomuchinjiro mugomo pedyo nepeji, Mhandara yakati:
“Mwanakomana mudikani, ndinoshuvira kukuudza masikati ano uye kuti uudze vana vangu vese kukosha kwekurarama mameseji. Kune avo vasingatendi, ndinoshuva kuvaudza kuti rimwe zuva, pane iri Muchinjiro, ndichapa chiratidzo chinoonekwa, uye vese vachatenda mukuvapo kwangu kwamai kuno Itapiranga, asi zvichinonoka kune avo kwete kutendeuka. Iko kutendeuka kunofanirwa kuve ikozvino! Munzvimbo dzese dzandakatombooneka uye kuramba ndichioneka, ndinogara ndichisimbisa maapparitions angu kuti pasave nekusahadzika, uye pano muIapiranga, kuratidzwa kwangu kweDenga kunosimbiswa. Izvi zvichaitika apo maapparitions angu pano paIapiranga achapera. Vese vanozoona chiratidzo chakapihwa muCross uyu; vachazvidemba pamusoro pekusanditeerera, nekuti vakaseka pane zvangu uye nekutumwa dzangu, asi zvichanonoka nekuti vachange vanyima mafaro angu. Ivo vachange varasikirwa nemukana kuti vaponeswe. Namatai, namatai, namata.
Dom Carillo Gritti, Bhishopi we diocese yeItacoatiara, akabvumidza chikamu che 1994-1998 chemashura se "emweya" kubva muna Chivabvu 31, 2009 uye pachavo vakaisa dombo repakona reSanctuary nyowani muItapiranga muna Chivabvu 2, 2010. Iwo mameseji kuna Edson Glauber, ayo anokwana pamusoro pe2000 mapeji, anowirirana zvakanyanya nemamwe akawanda akavimbika maporofita masosi, uye ane yakasimba eschatological dimension, anga ari chinhu cheZvidzidzo zvakawanda. Mutungamiri weMariologist, Dr. Mark Miravalle weSteubenville University vakapa bhuku kwavari, rakadanwa Mwoyo Matatu: Maapikisheni aJesu, Mako, naJoseph kubva kuAmazon.
Kubva parufu rwaDom Gritti mu2016, pakave nekukonana kusati kwapera pakati pedaocese yeItacoatiara uye Sangano rakagadzwa naEdson Glauber nemhuri yake kutsigira kuvakwa kweSanctuary. Diocesan Administrator akabata Ungano yeDzidziso yekutenda uye akawana chirevo mu2017 zvekuti CDF haina kufunga nezvemashura ekutanga kubva, chinzvimbo chakachengetedzwawo neArchdiocese yeManaus. CDF, iri pasi paCardinal Gerhard Ludwig Müller panguva iyoyo, haina kutaura nezvemuoni wechipiri, amai vaGlauber, Maria do Carmo, vakawanawo mvumo naBishop Gritti uyo anga afa.
Tichifunga kuti zvipuka hazvichabvumidzwe zviri pamutemo (asi hazvirambwe), zvinogona kubvunzwa zviri pamutemo kuti sei zvakadaro takasarudza kuratidza zvinhu zvakagamuchirwa naEdson Glauber pane ino webhusaiti. Pano zvinofanirwa kutaurwa kuti, kunyangwe mvumo yabhishopi wekare ichifanirwa kutorwa seyakadzingwa, chirevo cheCDF hachiratidze kutongwa kwe "Notification" zviri pamutemo, uye vazhinji vevatauri vakasimudza mibvunzo maererano netsika dzezviitiko zveDiocesan Administrator. . Pamusoro pezvo, zviito zvemitemo zvinoitwa neCDF zvinongorambidza 1) yepamutemo yeLiturgical kusimudzira mameseji aEdson, 2) "kufambiswa kukuru" kwemashoko ake naEdson iye kana 'Sangano' rake muItapiranga, uye 3) kusimudzira kwemashoko mukati Kutanga kweItacoatiara. Isu tinoramba tichiteerera zvizere neese aya mirairo; uye, kana mameseji ake akapomedzerwa zviri pamutemo mune ramangwana, ipapo tinozoabvisa kubva pawebhusaiti ino.
Kunyange chiri chokwadi kuti Dr. Miravalle vakabvisa bhuku ravo mushure mekudzidza gwaro reCDF, zvakakoshawo kuziva kuti mawebhusaiti akati wandei pasi rese ane zvinhu zvinofungidzirwa zvechiporofita izvo zvinozivikanwa nekutendeka kwavo kudzidziso dzeChechi zvisinei vakasarudza kuramba vachitsikisa shanduro dze meseji dzeItapiranga. Izvi zvimwe zvinonyanya kutsanangurwa nenyaya yekuti, panguva yehupenyu hwaDom Carillo Gritti, iwo maIpapiranga mavhesi akanakidzwa neyakajairika degree yekubvumidzwa. Zvakare, kumhanyisa kwemeseji 'zvemukati kwakadai kuti kumisa kufambiswa kwechinyorwa ichi kusvika gadziriso yenyaya yaEdson Glauber (iyo inogona kutora makore akati wandei) inogona kuisa njodzi kudzikamisa izwi rekudenga panguva yatinozonyanya kuda kuinzwa.
(1913-1985) Wife, Amai, Mystic, uye Muvambi weiye The Flame of Love Movement
Elizabeth Szántò anga ari wechiHungary asinganzwisisiki akazvarwa muBudapest muna 1913, airarama hupenyu hwehurombo uye hwakaoma. Iye aive mwana wedangwe uye iye ega padhuze nevaroora vake mapatya evana vevakoma vake kuti vararame kuve munhu mukuru. Pazera ramakore mashanu, baba vake vakafa, uye pazera gumi, Elizabeth akatumirwa kuWillisau, Switzerland kuti anogara nemhuri ine moyo wakanaka. Akadzokera kuBudapest kwenguva pfupi pazera gumi nerimwe kuti ave uye kutarisira amai vake vairwara zvakanyanya uye akarara pamubhedha. Mwedzi wakatevera, Erizabheti akarongerwa kukwira chitima kubva kuAustria na 10:00 am kuitira kuti vadzokere kumhuri yekwaSwitzerland vakasarudza kumutora. Aive ega uye zvisizvo paakasvika pachiteshi nenguva dza 10 pm Vaviri vechidiki vakaenda naye kuBudapest kwaakandosara kweupenyu hwake kusvika paakazofa muna 1985.
Achigara senherera padanho renzara, Erizabheti akashanda nesimba kuti ararame. Kaviri, akaedza kupinda muungano dzechitendero asi akaramba. Shanduko yakauya muna Nyamavhuvhu, 1929, paakagamuchirwa mukwaya yekereke uye vakasangana naKaroly Kindlemann, murayiridzi we chimney. Vakaroora muna Chivabvu 25, 1930, aine makore gumi nematanhatu uye iye aine makumi matatu. Pamwe chete, vakava nevana vatanhatu, uye mushure memakore gumi nematanhatu ekuroora, murume wake akafa.
Kwemakore akawanda kuteera, Erizabheti akatambura kuti azviriritire iye nemhuri yake. Muna 1948, Komisheni inozivikanwa yeHungary yaive tenzi ane hutsinye, uye akadzingwa pabasa rake rekutanga kuve nechifananidzo chaAmai Vakaropafadzwa mumba mavo. Nguva dzose aishanda anoshanda, Erizabheti haana kumbove nerombo rakanaka mumabasa ake marefu-akararama, sezvo airwira kupa mhuri yake chikafu. Pakupedzisira, vana vake vese vakaroora, uye nekufamba kwenguva, vakagara naye, vachiuya nevana vavo.
Hupenyu hwemunamato hwaElizabeth hwakadzama hwakaita kuti ave muKarimeri akarara, uye muna 1958 aine makore makumi mana nemashanu, akapinda mune makore matatu-erima remweya. Panenge panguva iyoyo, akatanga zvakare kuve nekurukurirano yepedyo naIshe kuburikidza nenzvimbo dzemukati, achiteverwa nekukurukurirana neMhandara Maria pamwe nengirozi yake yekuchengetedza. Musi waChikunguru 13, 1960, Erizabheti akatanga diary mukukumbira kwaIshe. Makore maviri kuita izvi, akanyora:
Ndisati ndatambira mameseji kubva kuna Jesu neMhandara Maria, ndakagamuchira kurudziro inotevera: 'Iwe unofanirwa kusava neudyire, nekuti tichakupa iwe basa guru, uye uchave uri pabasa racho. Nekudaro, izvi zvinokwanisika chete kana ukaramba usingazvide zvachose, uchizviramba. Chinangwa ichocho chinogona kupihwa pauri chete kana uchizvidawo kunze kwekuda kwako wakasununguka.
Mhinduro yaErizabheti yaive "Hongu", uye kuburikidza naye, Jesu naMary vakatanga sangano reChechi pasi pezita nyowani rakapihwa kune irwo rudo rusingagumi urwo Mariya ave narwo kuvana vake vese: "Murazvo weRudo."
Kubudikidza nezvakazova Chinyorwa cheMweya, Jesu naMariya vakadzidzisa Erizabheti, uye ivo vanoramba vachiraira vanotendeka muhunyanzvi hwamwari hwekutambudzika kuponeswa kwemweya. Mabasa anopihwa zuva rega rega revhiki, iro rinosanganisira kunyengetera, kutsanya, uye husiku husiku, nezvipikirwa zvakajeka zvakabatanidzwa kwavari, zvichirongedzwa zvine hunyanzvi hwevapristi nemweya iri mupurigatori. Mumashoko avo, Jesu naMariya vanotaura kuti iwo Murazvo weRudo rweMuviri weShivhenekeri waMariya inyasha huru dzakapihwa vanhu kubva mukuzvarwa kwemweya. Uye munguva yemberi isiri-kure, murazvo wayo uchafukidza nyika yose.
Cardinal Péter Erdő weEsztergom-Budapest, Primate yeHungary, akatanga komisheni yekudzidza Chinyorwa cheMweya uye kucherechedzwa kwakasiyana-siyana kwakapihwa nemabhishopi emuno pasirese kutenderedza kune Flames of Love kufamba, sesangano rakazvimirira revatendi. Muna 2009, kadhinari haana kungopa Imprimatur kuti Chinyorwa cheMweya, asi akaziva nzvimbo dzisinganzwisisike dzaErizabheti uye zvakanyorwa sezvazviri, "chipo kuChechi." Uyezve, akapa mvumo yake yepiscopal yeFlame of Love, iyo yakamboshanda mukati meChechi kwemakore anopfuura makumi maviri. Parizvino, iko kufamba kuri kutsvaga kubatazve sePublic Association yeVatendi. Musi waChikumi 19, 2013, Papa Francis vakaapa iko Chikomborero Chayo chekuApostora.
Inotorwa kubva kubhuku rinotengesa zvakanyanya, Yambiro: Zviratidzo uye Zviporofita zveChivheneko chehana.
Mufundisi, Mystic, Exorcist, Muvambi uye Superior General weThe Apostolic Fraternity yaSaint Benedict Joseph Labre
(Order yakavambwa muna 2012)
Mupristi uyo waunoverenga ave, zvinosuruvarisa, anga ari chinangwa chezhinji mhosva dzakashata. Izvi zvinotsoropodzwa mune rumwe ruzivo pano. Wese anofanirwa kuziva kuti Fr. Michel anodaro kwete tsigira mameseji evamwe vanonzi vanoona (semuenzaniso. John Leary, kana mameseji akashurikidzwa e "Maria Divine Mercy" kana "Mauto aMaria"). Fr. Michel zvakare haakurudzire kupona (anga achingokurudzira kuve nemwedzi mishoma yezvokudya paruoko rwehungwaru izvo, pamwe, hapana anogona kupokana nazvo mushure me COVID-19), uye haaraire vateereri vake kuti vaende kunovaka muviri " refuges. ” Chekupedzisira, runyerekupe rwekuti "atongerwa" neDiocese yake manyepo zvachose; vese iye neFaternity yaakatangisa vari mumamiriro akanaka neChechi uye vari muchimiro chekuteerera zvakakwana kuEcclesiastical Authority, kubva kuna Fr. Michel akagamuchira akawanda mafomu ekubvumidzwa.
Kune akawanda makuhwa enhema anotenderera pamhepo achisimbisa kuti Fr. Michel akataura zvinhu izvo, kutaura zvazviri, haana kubvira ataura. Kuti uwane gwara rakavimbika kune izvo dzidziso dzake chaizvo, ndapota tarisa kumazwi akataurwa naye, aunogona kuteerera mukati memapeji ewebsite ino, uye anaFr. Mvumo yakajeka yaMichel yekutumira pano.
Inotevera inotorwa kubva kubhuku rinotengesa zvakanyanya, Yambiro: Zviratidzo uye Zviporofita zveChivheneko chehana:
Fr. Michel Rodrigue ndiye muvambi uye Abbott wechinamato chitsva chechitendero chakabvumidzwa neChechi yeKaturike: The Apostolic Fraternity yeSt Benedict Joseph Labre mudhisheni raAmos muQuebec, Canada. Akazvarwa mumhuri yakatendeka yechiKatorike yevana makumi maviri nevatatu, Michel akakurira murombo. Mhuri yake yaigara pachikamu chidiki chekurima, uko kushanda nesimba nekupomba kuenda kuSunday Mass ine vana vakawanda vakatasva mabhiza kwakachengeta mhuri yake iri mupenyu mumuviri nemweya.
SaSt. Padre Pio uye nemimwe mweya yakasarudzwa, Mwari Baba vakatanga kutaura naMichel pazera nyoro. “Pandaive nemakore matatu,” anodaro Fr. Michel, "Mwari vakatanga kutaura neni, uye taigara tichitaura. Ndinoyeuka ndakagara pasi pemuti muhombe kuseri kwemba yedu papurazi remhuri tichibvunza Mwari, 'Ndiani akaita muti uyu?'
Mwari akati, "Ndadaro." Uye Paakataura izwi rinoti, 'Ini,' ndakangoerekana ndapihwa nzvimbo yakakura kwazvo pamusoro penyika, nezvedenga, uye pachangu, uye ndikanzwisisa kuti zvese zvakaitwa uye zvakabatwa zviripo Naye. Ndakafunga kuti munhu wese akataura kuna Mwari baba. Kubva pamakore matatu kusvika matanhatu, Ishe vaindirayiridza mukutenda uye vakandipa dzidzo yezvidzidzo zvouMwari. Akandiudzawo, pandakanga ndiine makore matatu, kuti ndichava mupristi. " Mwari Baba vakapa Michel dzidzo yakakwana kudaro mudzidzo yezvidzidzo zvekuti paakapinda Grand Seminary yeQuebec mushure mekusekondari, akaedza kubva mumakirasi ake aine A +. Michel akazoita kudzidza nezvepfungwa uye nharaunda dzedzidziso, dzakadai sengeology, pneumatology, zvakanyorwa naMadzibaba eChechi, achipedza kudzidza nachiremba mune zvebhaibheri.
Mushure mekuwana nekugadzirisa pekugara kwevechidiki vasina pekugara, izvo zvakavapa kutarisirwa kwepfungwa uye pamweya, Michel Rodrigue akagadzwa mupristi wedhisiki pazera ramakumi matatu. Akashanda semupristi wekereke kwemakore mashanu kuchamhembe kweOntario kutozosvikira bhishopi wake aziva kuti matarenda ake achashandiswa zvakanaka kugadzira vafundisi venguva yemberi. Fr. Michel akabva azova mupristi wechiSulpian achidzidzisa dzidziso yebhaibheri paGrand Seminary yeMontreal.
PaChristmas Eve, 2009, Fr. Upristi hwaMichel hwakatora chinja chinoshamisa. Akamutswa pakati pehusiku nekuvapo kwaSt Benedict Joseph Labre, uyo akamira parutivi pemubhedha wake, achizunza mapendekete ake kuti atarwe. Fr. Michel akamutswa akanzwa izwi ra Mwari baba richiti, "Mira." Saka Fr. Michel akasimuka. "Enda pakombuta." Saka akateerera. "Teerera unyore." Ipapo ndipo Mwari paakatanga kuraira bumbiro rose rechinamato chitsva, nekukurumidza kupfuura Fr. Michel anogona kunyora. Aifanira kuudza Mwari kuti anonoke!
Ipapo Mwari vakangoerekana varidzira Fr. Michel kupinda mundege isinganzwisisike kuenda kunzvimbo muDhiocese yaAmosi, Quebec, kwaAida kuti monastery ivakwe, uye yakamuratidza zvakadzama magadzirirwo emamongi. Mwari Baba vakaudza Fr. Michel kuti aizove muvambi weyu monastery. Aizotanga chirongwa chitsva chechitendero chinonzi Fraternité Apostolique Saint Benoît-Joseph Labre (The Apostolic Fraternity weSt Joseph Benedict Labre) kuitira kuti vagadzirire vapristi ramangwana reChechi yeKaturike. Fr. Michel pakutanga akapindura aine kutya kwekutya, sezvo zvaisungwa zvaive zvatova zvakawandisa, asi akakurumidza kuona kuti kuramba kuna Baba kwanga kusiri sarudzo. Nhasi wekutanga kwezvivakwa zviviri zvemamonari zvino zvakavakwa, chaizvo sekuda kwaMwari.
Mwari akapa chipo Fr. Michel Rodrigue ane zvipo zvinoshamisa zvehungwaru uye zvemweya, sekuporesa, kuverenga mweya, ndangariro yemifananidzo (iyo yakadzikira mushure mezvirwere zvakakomba uye kurwiswa kwemwoyo kusere!), Chiporofita, zvivimbiso, uye zviratidzo. Ane hunhu hunhu hunofadza uye kuseka kwakagadzirira, ukuwo panguva imwechete, kukomba kukuru maererano nezvinhu zvaMwari. Akaita zvekupenga, kuwedzera pamabasa ake semupurofesa we seminari, gurukota rezvipatara, mupristi weparishi, uye nguva pfupi yadarika, semuvambi uye Superior General wesangano idzva rechitendero muQuebec inotaura chiFrench. Fr. Michel Rodrigue anotambira rutsigiro ruzere rwabhishopi wake, uye zvese zvaanoona nezviratidzo zvinotumirwa kune vekwavo vemunharaunda kuti vabvumidzwe.
Mukadzi wedu anonzi Fr. Michel Rodrigue "Mupostori Wokupedzisira Nguva." Akapihwa zvakakwana uye neruzivo runobatsira ramangwana ramangwana renyika. Fr. Michel, nokudaro, inopenda pane yakakura canvas, iyo inoratidza kubatana uye kukosha kwehuporofita hwenguva yedu, kusanganisira iyo iri muRugwaro. “Zvino, ndinonzwisisa! Ikozvino ndaona! Taura vanhu vakanzwa Fr. Michel uye akambogara mutorwa muzvinyorwa zvechiporofita uye akabuda pachena.
Mashoko aFr. Michel pane webhusaiti iyi anotorwa kubva mune zvekurekodhwa zvezviratidzwa zvake. Dzimwe dzehurukuro dzake pachinhu chimwe chete dzakabatanidzwa kuva imwe, uye mune dzimwe nguva nzvimbo, shanduro haisiyo yemazwi kuitira kuti ushandise girama chaiyo yechiRungu.
Fr. Michel mwanakomana anoteerera weChechi yeKaturike. Mawebhusaiti mashoma akaisa, pasina mvumo yake, mazwi nezvake uye kubva kwaari, izvo zvisiri zvechokwadi. Fr. VaMichel, semuenzaniso, havatsigire kana kutomboziva nezve iwo mameseji aMaria Divine Ngoni, uye anotsigira Bishop Matthew H. Clark kuongororwa kwaJohn Leary, kwakazivisa kuti meseji yaVa Leary ndeyekwavanhu. Ona chirevo chake chakasainwa apa.
Tinokukoka iwe kuti uverenge nezvaFr. Rodrigue, kutanga nenyaya yake uye kutevera zvinyorwa uye mavhidhiyo nenzira yaanounzwa. Kuti ufambe kuburikidza navo neimwe nzira inogona kukuunzira zvisina musoro kunzwisisa kwako, sezvo hurukuro yega yega uye meseji kubva kudenga ichivaka pekupedzisira. Sevabatsiri ve ino webhusaiti, tinonzwa kuti Fr. Zvakazarurwa zvaMichel zvinofanirwa kuyedzwa seyakafumurwa, uye kukurudzira vaverengi kuti vaite saizvozvo maererano neCatechism yeChechi yeKaturike:
Kutungamirirwa neMagisterium yeKereke, iyo sensus fidelium anoziva nzira yekuziva nekugamuchira muzvizaruro izvi chero zvinonzi ndizvo chaizvo zvinodaidza Kristu kana vatsvene vake kuChechi. -Katekisimo yeChechi yeKaturike, kwete. 67
Panzvimbo yaFr. Michel:
Fr. Kurongeka kutsva kwaMichel, Apostolic Fraternity yeSt Benedict Joseph Labre muQuebec chipo chakakosha kune ramangwana reChechi. Yakashiswa naMwari, yechipiri monastery yekuraira ichiri kuvakwa. Kana vhidhiyo ichikukurudzira kuti utenge bhuku racho, Yambiro: Zviratidzo uye Zviporofita zveChivheneko chehana, kuburikidza QueenofPeaceMedia.com, ingoisa kodhi yekomboni, FRATERNITY, pane ngoro kana peji rekubuda, uye mari yacho inotumirwa kuzotsigira Fr. Nyowani yeMichel nyowani iri kuvakwa. Isu tinopa kuCdowndown kuHumambo zvakare tinokukoka iwe kuti upe rutsigiro rwako rwemari zvakanangana naF. Michel yeichi chakakosha kuedza. Kana iwe uchinzwa kudaidzwa, tapota tumira mipiro kukero iri pazasi. (Fr. Michel haana kukumbira isu kuti tiite izvi! Zvakare, hapana nzira yepamhepo yekupa).
Ndokumbira utumire kutarisa kunoitwa kune:
Utungamiri hwevaApostora hweSt Benedict Joseph Labre
Italy (1930-2011) Mupirisita, Mystic, uye Muvambi weMarian Movement yeVapristi
Inotevera yakagadziriswa, muchikamu, kubva kubhuku, Yambiro: Zviratidzo uye Zviporofita zveChivheneko chehana, Map. 252-253:
Baba Stefano Gobbi vakaberekerwa kuDongo, Italy, kuchamhembe kweMilan muna 1930 uye vakashaya muna 2011. Semunhu akangwara, akagonesa inishuwarenzi, uye akatevera kufona kuenda kuvapirisita, akaenda kuno gamuchira doctorate mune dzidzo yebhaibheri inoyera. iyo Pontifical Lateran University kuRome. Muna 1964, akagadzwa aine makore makumi matatu nematanhatu.
Muna 1972, makore masere ave hupristi hwake, Fr. Gobbi akafamba rwendo rwekuenda kuFatima, Portugal. Paaive achinamata panzvimbo inochengeterwa Mai Vedu kune vamwe vapristi vaive varamba kutaura kwavo uye vachizama kuzviumba mumabatanidzwa mukupandukira Chechi yeKaturike, akanzwa izwi raAmai vedu richimukurudzira kuti aunganidze vamwe vapristi vaizoda kutsaura ivo pachavo kuMetifiki yeMwoyo waMariya uye vabatwe zvakasimba nePapa uye Chechi. Iyi yaive yekutanga kwemazana emukati emukati kuti Fr. Gobbi aizo gamuchira pamusoro pehupenyu hwake hwese.
Kutungamirirwa nemameseji aya kubva kudenga, Fr. Gobbi akatanga Marian Movement yeVapirisita (MMP). Mharidzo dzemukadzi wedu kubva muna Chikunguru 1973 kusvika Zvita 1997, kuburikidza nemahara kusvika kunaF. Stefano Gobbi, rakabudiswa mubhuku, Kune Vapirisiti, Vana Vedu Vanodikanwa, iyo yakagamuchira Imprimatur yemakadhi matatu emakadhi uye mabhishopi mazhinji nemabhishopi pasi rose. Zviri mukati maro zvinowanikwa pano: http://www.heartofmaryarabic.com/wp-content/uploads/2015/04/The-Blue-Book.pdf
Mukutangisa kweiyo de facto handbook yeMMP: Kune Vapirisiti, Vana Vedu Vanodikanwa, inotaura nezvesangano iri:
Iri ibasa rerudo iro iro Rekunze kweMoyo waMariya urimutsira muChurch nhasi kuti vabatsire vana vake vese kurarama, netariro uye nerunyararo tariro, nguva dzinorwadza dzekucheneswa. Munguva dzino dzengozi dzakaipisisa, amai va Mwari neveChechi vari kutora danho vasingazeze kana kusagadzikana kubatsira kutanga nevapirisita, ivo vari vana vekubereka kwake. Chaizvoizvo chaizvo, basa iri rinoshandisa zvimwe zviridzwa; uye neimwe nzira, Don Stefano Gobbi akasarudzwa. Sei? Mune imwe ndima yebhuku, tsananguro inotevera inopihwa: "Ini ndakakusarudza nekuti ndiwe unogonesa kuita chombo; saka hapana munhu angati iri ibasa rako. Kufamba kweMarian kweVapirisita kunofanirwa kunge kuri kwangu kwega basa. Kuburikidza neutera hwako, ini ndinoratidzira simba rangu; nokusava nebasa kwako, ndicharatidza simba rangu ” (meseji yaChikunguru 16, 1973). . . Kubudikidza nesangano iri, ndiri kudaidza vana vangu vese kuti vazvinatse pachavo kuMoyo wangu, uye kuparadzira kwese kunowanikwa minyengetero yemunamato.
Fr. Gobbi akashanda nesimba kuti azadzise mishando Yedu Mukadzi akapiwa kwaari. Pakazosvika Kurume wa1973, vapristi vanosvika makumi mana vaive vapinda muMarian Movement yeVapirisiti, uye pakazopera 1985, Fr. Gobbi akange akwira ndege dzinopfuura mazana matatu uye dzakatora nzendo dzakawanda nemotokari nechitima, achishanyira makondinendi mashanu akati wandei kupfuura. Nhasi uno bato rinonongedzera kuve nhengo dzeanopfuura mazana mana emakadhi eChikatorike nemabhishopi, vanopfuura zviuru mazana matanhatu zvevapristi veKatorike, nemamirioni evaKatorike kupota nyika, nemishumo yekunyengetera nekugovana ushamwari pakati pevapristi uye vanozotendeka munzvimbo dzese dzepasi.
MunaNovember wa1993, MMP muUnited States, inogara kuSt. Francis, Maine, yakagamuchira chikomborero chepapa kubva kuna Papa John Paul II, uyo akaramba aine hukama hwepedyo naFr. Gobbi uye akapemberera Misa naye mukamuri yake yekuvanzika yeVictoria gore rimwe nerimwe kwemakore.
Iwo mameseji ayo Mukadzi Wedu akapa kuna Fr. Gobbi kubudikidza nekushongedzwa kwemukati ndeimwe yeakawanda kwazvo uye akazara nezve rudo rwake kuvanhu vake, kutsigira kwake nguva dzose kwevapristi vake, kutambudzwa kuri kuuya kweChechi, uye iyo yaanodaidza kuti "Second Pentekosti," rimwe izwi reYambiro, kana Kuvhenekerwa kwehana yemweya yese. MuPentekoste Yechipiri iyi, Mweya waKristu uchapinda mukati memoyo wese zvine simba uye zvakaringana zvekuti mumaminitsi mashanu kusvika gumi nemashanu, munhu wese achaona hupenyu hwake hwechivi. Iwo mameseji eMarian kuna Baba Gobbi anoita kunge anoyambira kuti chiitiko ichi (uye mushure mezvo Chishamiso chakavimbiswa uye zvakare Chirango kana Chirango) chaizoitika mukupera kwezana ramakumi maviri. [Mharidzo # 389] Tsamba dzaMai Vedu Vekubudirira Kwakanaka dzinotaura zvakare kuti zvimwe zvezviitiko izvi zvichaitika "muzana ramakumi maviri." Saka chii chinotsanangura mutsauko uyu munguva yenyika?
“Ndiri kuwedzera nguva yengoni nekuda kwevatadzi. Asi ndine nhamo kana vasingazive nguva yekushanya kwangu. (Diary yeSt Faustina, # 1160)
Mumashoko aAmai Vakaropafadzwa kuna Fr. Gobbi, akadaro,
"Nguva zhinji ndakapindira kuitira kudzosera mberi nekufamba kwenguva kutanga kwekutongwa kukuru, kwekunatswa kwevanhu varombo, vava nemweya yakaipa." (#553)
Uye zvakare kuna Fr. Gobbi iye akazivisa:
"… Nokudaro ndakabudirira zvakare kudzosera shure nguva yechirango yakatemwa neruramisiro yaMwari kumunhu uyo ​​wakaipa kupfuura panguva yemafashamo." (# 576).
Asi ikozvino, zvinoita, Mwari haanonoke kuenda mberi. Zviitiko zvakafanotaurwa naamai Vakaropafadzwa kuna Fr. Stefano Gobbi zvino zvave kutanga.
chitsamba: Makore makumi maviri nematatu apfuura, murume nemukadzi muCalifornia, avo vaigara pamwechete muhupenyu hwezvivi, vakatanga shanduko yakadzama kuburikidza neTsitsi dzaMwari. Mudzimai akange akurudzirwa mukati kuti atange boka yerosari mushure mekusangana kwake kwekutanga Divine Mercy novena. Mwedzi minomwe gare gare, chifananidzo cheNye Mukadzi weMutaka Pasinei Nemo mumba mavo chakatanga kuchema mafuta zvakanyanya (gare gare, zvimwe zvidhori zvinoera uye mifananidzo yakatanga kuyerera mafuta anonhuhwirira panguva yekurovererwa uye chifananidzo cheSt Pio chakadeura ropa. akarembera muMarian Center iri pa Divine Divine Shrine muMassachusetts). Izvi zvakavatungamira kuti vatendeuke kubva kwavo kurarama uye kupinda muchirairo chesakaramende. Anenge makore matanhatu gare gare, murume akatanga zvinonzwika kunzwa izwi raJesu (izvo zvinonzi "nzvimbo"). Aive asina kana katekisisi kana kunzwisisa kweKutenda kweKatorike, saka izwi raJesu rakavhundutsa nekumubata. Kunyangwe hazvo mamwe mazwi aIshe aive eyambiro, akarondedzera izwi raJesu serakanaka nguva dzose uye rakapfava. Akatambirawo kushanyirwa kubva kuSt. Pio nenzvimbo kubva kuSt Thèrèse de Lisieux, St. Catherine weSiena, St. Michael Mutumwa mukuru uye nemazana kubva kuna Mai Vedu vari pamberi peSakaramende Yakaropafadzwa. Mushure mekuburitsa makore maviri emeseji nezvakavanzika (zvinozivikanwa chete nemurume uyu uye kuti zviziviswe munguva inotevera inongozivikanwa naIshe chete) zviwanikwa zvakamira. Jesu akaudza murume uya, “Ndichagumisa kutaura newe izvozvi, asi Mai Vangu vacharamba vachikutungamira."Vaviri ava vakanzwa kudaidzwa kuti vatange cenacle yeMarian Movement yeMapristi uko kwavaizofungisisa nezve meseji dzaMai Vedu kuna Fr. Stefano Gobbi. Akanga ari makore maviri mune aya cenacles apo mazwi aJesu akazadzikiswa: Mukadzi Wedu akatanga kumutungamira, asi nenzira inoshamisa kwazvo. Munguva yecenacles, uye pane dzimwe nguva, murume uyu aizoona "mumhepo" pamberi pake huwandu hwemashoko kubva kune anonzi "Bvuu, ” kuunganidzwa kwezvakazarurwa Kwatakapihwa naMai kuna Fr. Stefano Gobbi, "Kune Vaprisita Vanodiwa Navana Vedu." Zvinokosha kuti murume uyu adaro kwete Verenga Blue Book nanhasi (sezvo dzidzo yake iri shoma uye aine hurema hwekuverenga). Kwemakore, aya manhamba akavezwa zvaizovimbisa pane zvisingaverengeke kutaurwa kwekuita mumakona avo, uye zvino nhasi, zviitiko zviri kuitika kupota nyika. Fr. M meseji yaGobbi haina kukundikana asi ikozvino vari kuwana kuzadzikiswa kwavo munguva chaiyo.
Ipo pese idzi nhamba padzinowanikwa kuCdowndown kuHumambo, tichaita kuti dzivepo pano.
Kuti uve nesimba rekutsvenesa Marian, ita bhuku racho, Kufa kwaMariya KweMary: Kudzoserwa kweMweya Kubatsira kweDenga, yakatsigirwa naAbhishopi mukuru Salvatore Cordileone naBishop Myron J. Cotta, uye ichi Nguo yaMary Kuzvitsa Chinyorwa Chemunamato. Maona www.marysMantleConsecration.com.
Colin B. Donovan, STL, "Marian Movement yeVapirisiti," EWTN Nyanzvi Dzemhinduro, yakawanikwa munaKurume 4, 2019, https://www.ewtn.com/expert/answers/MMP.htm
Ona pamusoro uye www.marysMantleConsecration.com.
Nzvimbo Kumusoro kweMunyika yeMarian Movement yeVapirisiti muUnited States of America, Mukadzi Wedu Anotaura NeVaprisita Vake Vanodikanwa,th Chinyorwa (Maine; 1988) p. xiv.
Nei Gisella Cardia?
Zvishandiso muTrevignano Romano, Italy
Iwo anonzi Marian maapparitions muTrevignano Romano muItaly kuenda kuGisella Cardia zvinyowani. Vakatanga muna 2016 zvichitevera kushanya kwake kuMedjugorje, Bosnia-Herzegovina, uye kutenga kwesitendi yeRudzi Redu, iyo yakazotanga kuchema ropa. Maapparitions atove nyaya yeiyo yekuItaly yenyika terevhizheni panguva iyo muoni akazvibata nerunyararo rwakanaka pamberi pevamwe kushoropodzwa kupisa kubva kunevatsoropodzi vari mu studio akananga kwaari nemabhuku maviri. A Ndihil obstat nguva pfupi yapfuura yakapihwa naAchbishop muPolish shanduro yechipiri yeizvi, Muna Cammino con Maria ("Ndiri munzira naMaria") rakaburitswa na Edizioni Segno, iine nyaya yemahara uye iyo yakabatana meseji kusvika muna 2018. Pari kunze zvakadaro Ndihil obstat haina, kana yega, inoita in situ diocesan kubvumidzwa kwemaapuro, zvirokwazvo haina kukosha. Uye Bhishopi wepanzvimbo weCivita Castellana anoita kunge anga akatsigira chinyararire Gisella Cardia, achipa mukana wekutanga kuenda kutemberi kune vashanyi vakawanda vakatanga kuungana mumba maCardia kuti vanyengetere, kana nhau dzezviratidzo dzatanga kupararira.
Pane zvikonzero zvinoverengeka zvekutarisa kuna Trevignano Romano sechinhu chakakosha uye chakasimba chechiporofita. Chekutanga, zvirimo mumashoko aGisella zvinowirirana zvakanyanya ne "chiporofita chibvumirano" chinomiririrwa nezvimwe zvinyorwa zvazvino, pasina kana chiratidzo chekuziva kwake kuvapo kwavo (Luz de Maria de Bonilla, Pedro Regis, Fr. Michel Rodrigue, Fr. Adam Skwarczynski , madhaari aBruno Cornacchiola...).
Kechipiri, akati wandei mameseji echiporofita akanyanya kunge anoita kunge azadzikiswa: isu tinowana chikumbiro munaSeptember 2019 kuti tinamate China sezvo iri sosi yezvirwere zvitsva zvinouya nemhepo. . .
Yetatu, iwo mameseji agara achiperekedzwa nezvinhu zvinoonekwa, humbowo hwemifananidzo hunowanikwa mukati Muna Cammino con Maria, isingagone kuve muchero wekufungidzira kwekufungidzira, kunyanya kuvepo kwechistigmata pamuviri waGiselle uye kutaridzika kwematanda kana zvinyorwa zvechitendero mune ropa pamaoko aGisella. Ona iyo mifananidzo yakatorwa kubva kune yake yekuonekwa webhusaiti https://www.lareginadelrosario.com/, ayo anoti Siate testimoni (“iva zvapupu”), Abbiate fede (“ivai nokutenda”), Maria santissima (“Maria mutsvene kwazvo”), Popolo mio (“Vanhu vangu), uye Amore (“ Rudo ”).
Ehezve, izvi zvinogona kufungidzirwa kuve hunyengeri kana kupindira kwedhimoni, sekuchema kwechifananidzo cheMhandara nemifananidzo yaJesu mumba maGisella nemurume wake, kwaGianni. Pfungwa yekuti ngirozi dzakadonha dzinogona kunge dziri panotangira mameseji zvakadaro zvinoita kunge zvisingaite, zvichipiwa zvinyorwa zvadzo zvouMwari uye kurudziro kuutsvene. Tichipiwa ruzivo rwedu kuburikidza neuchapupu hweanodzinga mweya pamusoro pekuti ngirozi dzakadonha dzinosema sei nekutya Maria kusvika pakuramba kumutumidza zita, mukana wekuti munhu angangoerekana akonzera kugadzirwa kwemazwi ekuti "Maria mutsvene kwazvo" ("Maria santissima") muropa pamuviri wemuoni raizoita kunge riri padyo nen nil.
Kunyangwe zvakadaro, stigmata yaGisella, mifananidzo yake yeropa "hemographic", kana zvidhori zvinobuda ropa hazvifanirwe, pachavo, kutorwa sechiratidzo chehutsvene hwemuoni sekumupa carte blanche maererano nezvose zvichaitika mune ramangwana.
Asi pane humwe vhidhiyo humbowo hwezvinhu zvezuva pamberi pezvapupu zvakawanda panguva yemunamato panzvimbo yemashura, yakafanana neyakaitika ye "Kutamba Zuva" muFatima muna 1917 kana zvakapupurirwa naPope Pius XII muVictoria Gardens of the Dogma of the Assept muna 1950. Izvi zviitiko, kana zuva rikaita kutenderera, kupenya kana kushandurwa kuva Mutungamiriri weChisimba, zvakajeka hazvigone kutorerwa nzira dzevanhu, uye kunyorwa (kunyangwe zvisina kukwana) pakamera. chete muchero wekubatanidzwa pamwe chete. Click pano kuona vhidhiyo yechishamiso chezuva (Trevignano Romano - 17 Settembre 2019 - Miracolo del sole / "Trevignano Romano - Gunyana 17, 2019 - Chishamiso chezuva.") Click pano kuona Gisella, murume wake, Gianni, uye mupristi, vachipupurira chishamiso chezuva muzuva reruzhinji rweimwe yemagariro aGisella eMhandara Maria. (Trevignano Romano miracolo del chete 3 gennaio 2020 / "Chishamiso chaTrevignano Romano wezuva, Ndira 3, 2020")
Kuzivana nenhoroondo yeMarian apparitions kunoratidza kuti izvi zvishamiso zvinofanirwa kutorwa senge chiratidzo chechokwadi chekutaurirana kwekudenga.
Jennifer amai vechidiki vemuAmerican uye amai vemba (zita rake rekupedzisira rakabatwa pachikumbiro chemukuru wake wezvemweya kuitira kuti aremekedze kuvanzika kwemurume wake nemhuri yake.) Aive, pamwe, izvo munhu angadai akadana "anowanzo" weSvondo anoenda Svondo uyo aiziva zvishoma nezvekutenda kwake uye kunyangwe zvishoma nezveBhaibheri. Akafunga pane imwe nguva kuti "Sodhoma neGomora" vaive vanhu vaviri uye kuti "Mhemberero" izita reboka rerock. Zvino, panguva yeKudyidzana paMisa rimwe zuva, Jesu akatanga kutaura zvinonzwika kwaari achipa mashoko erudo nekuyambira achimuudza, “Mwanakomana wangu, iwe uri wekuwedzera weshoko Rangu Retsitsi. Sezvo mameseji ake anotarisa zvakanyanya kururamisiro iyo fanira huyai pasingapinduke nyika, ivo vanozadza zvirokwazvo chikamu chekupedzisira cheshoko raSt Faustina:
Rimwe zuva, Ishe vakamuraira kuti ataurire mameseji kuna Baba Vatsvene, Papa John Paul II. Fr. Seraphim Michalenko, mutevedzeri wemutungamiriri weSt. Faustina's canonization, akashandura mameseji aJennifer muchiPolish. Akaverengera tikiti kuenda kuRoma uyezve, nekumwe kusawirirana, akazviwana iye nevamwe vake mumakiromita emukati meVatican. Akasangana naMonsignor Pawel Ptasznik, shamwari yepedyo uye anoshanda naPapa nePolish Secretary of State of the Vatican. Iwo mameseji akaendeswa kuna Cardinal Stanislaw Dziwisz, John Paul II secretary chaiye. Mumusangano wekutevera, Msgr. Pawel akati, "Paridza meseji pasirese nzira yaungagone."
Nei Luz de Maria de Bonilla?
Izvi zvinotevera zvinorongedzwa kubva kubhuku rinotengesa zvakanyanya, Yambiro: Zviratidzo uye Zviporofita zveChivheneko chehana.
Luz de María de Bonilla muKaturike asinganzwisisike, anokahadzika, mudzimai, amai, Chitatu Order Augustinian, uye muporofita anobva kuCosta Rica, parizvino achigara kuArgentina. Akakurira mumusha unonamata zvakanyanya nekuzvipira kukuru kune Eucharist, uye semwana, akawana kushanya kwekudenga kubva kumutumwa wake wekuchengetedza uye naamai Vakaropafadzwa, waaiona seshamwari dzake nevaaivimba naye. Muna 1990, akagamuchira kuporeswa kunoshamisa kubva kune chimwe chirwere, achibatana nekushanya kunobva kuna Amai Vakaropafadzwa uye nekudana neruzhinji rwekufona kugovera zviitiko zvake zvakavanzika. Nenguva isipi aizove nekufadzwa kukuru kwete chete pamberi pemhuri yake - murume wake nevana vasere, asiwo nevanhu vepedyo naye vakatanga kuungana kuti vanyengetere; ivo vakaumba chigaro chekunamatira, chinoenderana naye nanhasi.
Mushure memakore ekuzvirega kwake kune kuda kwaMwari, Luz de María akatanga kurwadziwa nemuchinjiro, waanotakura mumuviri wake pamwe nemweya. Izvi zvakatanga kuitika, akagovana, paChishanu Chakanaka: “Ishe wedu vandibvunza kana ndaida kutora chikamu munhamo dzake. Ini ndakapindura ndichivimbisa, uye mushure mezuva rekuenderera mberi kweminamato, husiku ihwohwo, Kristu akazviratidza kwandiri paMuchinjiko akagovana maronda ake. "Kwaive kurwadza kusinga tsanangurike, kunyangwe ndichiziva kuti kunyangwe hazvo kuchirwadza sei, hakusi iko kurwadziwa kwakazara uko Kristu anoramba achitambura nekuda kwevanhu." (("Revelamos Quen Es la Vidente Luz de María," Foros de la Virgen María, yakawana Chikunguru 13, 2019, https://forosdelavirgen.org/118869/luz-de-maria-reportaje))
Makanga muri munaKurume 19 wa 1992, apo Amai Vakaropafadzwa vakatanga kutaura nguva zhinji naLuz de María. Kubva ipapo, akagamuchira meseji mbiri pasvondo uye pano neapo, mumwe chete. Iwo iwo mameseji pakutanga akauya senzvimbo dzemukati, achiteverwa nezviratidzo zvaMary, akauya kuzotsanangura basa raLuz de María. "Ini ndakanga ndisati ndamboona runako rwakadai." Ruz akadaro nezvekuonekwa kwaMariya. “Chimwe chinhu chausingambofa wakambojaira. Nguva imwe neimwe yakafanana neyokutanga.
Mwedzi inoverengeka gare gare, Maria naMutumwa Michael Mutumwa mukuru vakamuunzira kunaIshe wedu muchiratidzo, uye nekufamba kwenguva, Jesu naMariya vaizotaura kwaari nezvezviitiko zvinouya, seyambiro. Iwo mameseji akaenda kubva pakuvanzika kune veruzhinji, uye nekuraira kwaMwari, anofanirwa kuvadzidzisa kupasirese.
Mazhinji emaporofita Luz de María akave akatowana akatozadziswa, kusanganisira kurwiswa kweTwin Towers muNew York, iyo yakaziviswa kwaari mazuva masere pamberi. Mune iwo mharidzo, Jesu naMariya vanoratidza kusuruvara kwavo kukuru pamusoro pekusateerera kwemunhu mutemo waMwari, izvo zvakamuita kuti abvumirane nezvakaipa uye atorere Mwari. Ivo vanonyevera nyika nematambudziko anouya: chikominisiti uye nechauya chiitiko; hondo uye kushandiswa kwezvombo zvenyukireya; kusvibiswa, nzara, nematambudziko; shanduko, kusagadzikana kwenzanga, uye hutsika hunoshatisa; kupokana muChechi; kudonha kwehupfumi hwenyika; kuoneka kwavazhinji uye kutonga kwenyika kwaantikristu; kuzadzikiswa kweYambiro, Chishamiso, uye nekurangwa; kudonha kwe asteroid, uye shanduko yenyika yepasi, pakati pemamwe meseji. Zvese izvi hazvisi zvekutyisa, asi kukurudzira munhu kuti atendeukire kuna Mwari. Haasi ese mameseji aMwari matambudziko. Kune zvakare kuzivisa kwekutangwazve kwechokwadi kutenda, kubatana kwevanhu vaMwari, iko kukunda kweIsaviro yeMoyo waMariya, uye kukunda kwekupedzisira kwaKristu, Mambo weChisiko, apo kuchange kusisina kupatsanurana, uye tichava vanhu vamwe chete pasi pemumwe Mwari.
Baba José María Fernandez Rojas vakasara padivi paLuz de María semureuriri wavo kubva pakutanga kwenzvimbo dzake nezviratidzo, uye vapristi vaviri vanoshanda naye zvachose. Iwo mameseji aanotambira anorekodwa nevanhu vaviri uye anobva anyorerwa natete. Mumwe mupristi anogadzirisa zviperengo, obva apa mumwezve maficha kuongorora kwekupedzisira asati aisa kune webhusaiti, www.munove # eria.com, kugoverwa pamwe nenyika. Iwo mameseji akaunganidzwa mubhuku rine musoro, Humambo Hwako Huye, uye munaKurume 19, 2017, Juan Abelardo Mata Guevara, SDB, Titular Bishop weEstelí, Nicaragua, akavapa Imprimatur yeChechi. Tsamba yake yakatanga:
Estelí, Nicaragua, Mwaka waIshe wedu, Kurume 19 wa 2017
Humwari hweMutungamiriri weKutendeka Saint Joseph
Mavhoriyamu ane "PRIVate ISUKWA" kubva kudenga, akapiwa kuna Luz de María kubva gore ra2009 kusvika panguva ino, ndakapihwa ini kuti ndiwane kutenderwa. Ini ndakaongorora pamwe nekutenda uye kufarira aya mavhoriyamu ane musoro, ZVIRI MAMBO HUYA, uye ndasvika pakufunga kuti ivo vari kudana kuvanhu kuti vadzokere kunzira inoenda kuupenyu hwusingaperi, uye kuti iwo mameseji kurudziro kubva kudenga munguva dzino. umo munhu anofanira kungwarira kuti arege kutsauka kubva kuIzwi raMwari.
Muzvakazaruro zvoga zvoga zvakapihwa kuna Luz de María, Tenzi wedu Jesu Kristu uye Mhandara Yakaropafadzwa Mary vanotungamira matanho, iro basa, uye zviito zvevanhu vaMwari munguva dzino mune izvo vanhu vanofanirwa kudzokera kudzidziso dziri muMagwaro Matsvene.
Iwo mameseji ari mavhoriyamu aya kuratidzwa kwekunamata, huchenjeri hwamwari, uye hutsika kune avo vanovagamuchira nekutenda uye nekuzvininipisa, saka ini ndinovakurudzira kuti iwe uverenge, kufungisisa, uye kuita.
Ini ndinosarudzira kuti ini handina kuwana chero dzidziso yedzidziso inoedza kupokana nekutenda, hutsika uye hunhu hwakanaka, hwandino kupa izvi zvinyorwa izvi ZVINOGONESA. Pamwe chete nemakomborero angu, ndinotaura zvishuwo zvangu zvakanaka zve “Mashoko eDenga” aripano kuti aratidzike mune chimwe chisikwa chakanaka. Ini ndinokumbira Mhandara Maria, Amai va Mwari naamai Vedu, kutireverera kuitira kuti kuda kwaMwari kuitwe
". . . Panyika sezvakunoitwa kudenga (Mt, 6:10). ”
Musoro Bishop weEstelí, Nicaragua
Pazasi pane mharidzo yakapihwa naLuz de María muEsteril Cathedral muNicaragua, nesumo yakapihwa naBishop Juan Abelardo Mata avo vakamupa Imprimatur:
Tinya apa kuti uone vhidhiyo.
Chokwadi, chibvumirano chenyika dzese chinoita kunge chakabuda kuti iwo mharidzo dzaLuz de Maria de Bonilla dzakakodzera kufungwa nezvazvo. Pane zvikonzero zvinoverengeka zveizvi, izvo zvinogona kupfupikiswa seinotevera:
• The Imprimatur veChechi yeKaturike, yakapihwa naBhishopi Juan Abelardo Mata Guevara weEsteril mu2017 kune zvakanyorwa naLuz de Maria mushure megore ra2009, pamwe neshoko remunhu pachake rinosimbisa kutenda kwake mukubva kwavo kunoshamisa.
• Izvo zvinogara zvichikwidziridza zvebhaibheri zvemukati uye mufambiro weiyi mirayiridzo uye kuzvipira.
• Chokwadi chekuti zviitiko zvakawanda zvakafanofungidzirwa mune idzi meseji (kuputika kwemakomo munzvimbo dzakasarudzika, kurwiswa kwemagandanga mune dzimwe nzvimbo, seParis) zvakatoitika zvechokwadi.
• Kuswededzerana uye kutsanangurwa kwakabatana, pasina zano rekupaza, nem meseji kubva kune zvimwe zvakakomba izvo Luz de Maria anoita kunge anga asingazive ega (saFr. Michel Rodrigue uye vaiona muHeede, Germany panguva yeChitatu. Reich).
• Kuvapo kwenhamba inofungidzirwa yezvakaitika zvisinganzwisisike zvinofambidzana naLuz de Maria (kunyadziswa, kuroverera ropa kubuda pamberi pake, mifananidzo yechitendero ichibvisa mafuta). Dzimwe nguva izvi zviri pamberi pezvapupu izvo isu vhidhiyo chiratidzo (ona pano).
Kuti uverenge zvimwe nezve Luz de Maria de Bonilla, ona bhuku racho, Yambiro: Zviratidzo uye Zviporofita zveChivheneko chehana.
Nei Marco Ferrari?
Muna 1992, Marco Ferrari akatanga kusangana neshamwari kunamatira iyo Rosary manheru emugovera. Musi waKurume 26, 1994 akanzwa izwi richiti "Mwanakomana mudiki, nyora!" "Marco, mudiwa mwanakomana, usatya, ndiri amai vako, nyorera vakoma vako vese nehanzvadzi". Muitiro wekutanga we "Amai Verudo" semusikana ane makore gumi nemashanu, wakaitika muna Chikunguru 15; gore rakatevera, Marco akapihwa matsamba akavanzika kuna Papa John Paul II na Bhishopi weBrescia, aakaparadzira nenzira kwayo. Akagamuchirawo zvakavanzika gumi nezvinomwe zvine chekuita nenyika, Italy, mavonero ari munyika, kudzoka kwaJesu, Chechi uye Chakavanzika chechitatu cheFatima.
Kubva 1995 kusvika 2005, Marco akange aoneka stigmata panguva yeLent uye akave nekushamwaridzana naIshe Passion musi wakanaka weChishanu. Zvimwe zviitiko zvinoverengeka zvisingazivikanwe nesainzi zvakaonekwawo muParatico, kusanganisira kurohwa kwemufananidzo wa "Mai Verudo" pamberi pevapupuri 18 muna1999, pamwe nezvishamiso zviviri zvechechi muna 2005 na 2007, chechipiri chiri kuitika chikomo cheapparition chine vanhu vanopfuura zana varipo. Panguva iyo komisheni inoongorora yakagadzwa muna 100 naBishop weBrescia Bruno Foresti, Kereke haina kumbobvira yatora chinzvimbo pamisangano, kunyangwe boka raMarco remunamato rakabvumidzwa kusangana muchechi iri mudhisheni.
Marco Ferrari akave nemisangano mitatu naPapa John Paul II, mashanu aine Benedict XVI uye vatatu naPapa Francis; nerutsigiro rweChechi, Sangano reParatico rakagadzira nhepfenyuro dzakawanda dzenyika dzakawanda dze "Oases of the Mother of Love" (zvipatara zvevana, nherera, zvikoro, rubatsiro kune vane maperembudzi, vasungwa, vanopindwa muropa nezvinodhaka ...). Mureza wavo wakaropafadzwa nguva pfupi yadarika naPapa Francis.
Marco anoenderera mberi nekutambira meseji paSvondo yechina yemwedzi wega wega, zviri mukati mazvo zvinoshandurwa zvine simba nehumwe uporofita hwakawanda hunowanikwa.
Kuwedzera mamwe mashoko: http://mammadellamore.it/inglese.htm
Nei Martin Gavenda?
Ichitevera Turzovka (1958-1962) uye Litmanova (1990-1995), musha weDechtice ndiyo yechitatu nzvimbo yemazuva ano yekuonekwa muSlovakia, uko zviitiko zvisina kutsanangurwa nesainzi zvakatanga muna Zvita 4, 1994. Vari munzira kuenda kumba kubva kuSvondo Misa, vana vana vaive kutaura nezvekuenda kunonamata nemuchinjikwa wemuno muDobra Voda apo mumwe wavo akaona zuva richitenderera uye richichinja ruvara. Vachiona kuti ichi chingave chiratidzo, vana vakatanga kunamata Rosary. Martin Gavenda - uyo aizove muoni mukuru wemaporofita - akaona mwenje muchena uye mukadzi wechikadzi uyo akati aida kumushandisa pakuronga kwaMwari. Pakutaridzika kwemukadzi kunotevera, vana vakasasa chimiro chisinganzwisisike nemvura yakaropafadzwa, vachifunga kuti ingave dhimoni, asi mukadzi haana kunyangarika. Aya maitiro akaenderera muDobra Voda, zvakare muDechtice, uko vamwe vana zvakare vakatanga kugamuchira mameseji. Musi waAugust 15, 1995, mukadzi uyu akazvizivisa saMaria, Mambokadzi weRubatsiro.
Misoro mikuru yemeseji kubva kuDechtice, inoenderera nanhasi, zvakangofanana neiya yakagamuchirwa kune mamwe masayiti anotendeseka mumakumi emakore apfuura. Vanosimbisa kuyedza kwaSatani kwekuparadza Kereke nenyika yose nemushonga wakapihwa neDenga: masakaramende, Rosary, kutsanya nekuripira mhosva dzakaitirwa Mwoyo yaJesu naMaria, hutiziro ne "areka" yevakatendeka mumatambudziko edu nguva.
Vana vakagamuchirwa uye vakakomborerwa naMgr Dominik Toth weTrnava-Bratislava archdiocese, uko kubvunzurudzwa kwepamutemo kwakaitwa muna Gumiguru 28, 1998. .
Sei maVisionaries emuMukadzi wedu weMedjugorje?
Medjugorje ndeimwe yenzvimbo dzinoshanyirwa "dzinoshanda" masayiti epasirese. MunaMay wa2017, komisheni yakagadzwa naPapa Benedict XVI uye nasachigaro naCardinal Camillo Ruini vakapedzisa kuferefeta kwavo nezvezviratidzo. Komisheni iyi zvakanyanya vakavhota vachida yekuziva hunhu hunoshamisa hweanomwe ekutanga mashura. Muna Zvita wegore iro, Pope Frances vakamisa kusarudzika kwema diocese akaronga mafambiro, zvichisimudzira Medjugorje kuita chinzvimbo. Mumiriri weVatican Archbishop Henryk Hoser akagadzwawo napapa kuti atarisire kuchengetwa kwemapilgrim ikoko, achizivisa muna Chikunguru 2018 kuti musha mudiki uyu "manyuko enyasha pasi rese." Muhurukuro yega naBishop Pavel Hnilica, Pope John Paul II vakati, "Medjugorje kuenderera, kuwedzera kwaFatima." Kusvika pari zvino, mashura uye nenyasha dzinoperekedza zvakaburitsa anopfuura mazana mana emazana ekuporeswa, mazana emabasa ehupirisita, zviuru zvehushumiri pasirese, uye zvisingaverengeke uye kazhinji kutendeuka kunoshamisa.
Nezve nhoroondo yekutarisisa kweKereke kuona kweMedjugorje, verenga Medjugorje… Zvaungasaziva. Mark Mallett akapawo mhinduro kumakumi maviri nemana ekupokana nemaapuro. Verenga Medjugorje… Kusvuta Guns.
Kuti uwane inokurudzira yekuverenga inoshamisa shanduko seMedjugorje maapparitions uye kuverenga nhoroondo yeyekutanga apparitions, ona vatengesi vakanyanya, Yakazara YEMAHARA: Zvishamiso Nhau dzeKuporesa uye Shanduko kuburikidza nekureverera kwaMariya uye VEVANHU Uye MARI: Sei Varume Vatanhatu Vakakunda Hondo Huru Kwazvo Hupenyu Hwako.
Nei Pedro Regis?
Chiono chedu Mukadzi weAnguera
Ine mameseji makumi matatu nemasere makumi matatu nemanomwe ekuti yakagashirwa naPedro Regis kubva muna4921, muviri wezvinhu zvinosanganisirwa nemaficha akatsanangurwa eWedu Mukadzi weAnguera muBrazil akakosha zvakanyanya. Zvakakwezva kutarisisa kwevanyori vanehunyanzvi vakaita senge mutori wenhau anozivikanwa anozvivikanwa wekuItaly, Saverio Gaeta, uye munguva pfupi yapfuura yave iri nyaya yeongororo yebhuku-murefu nemuongorori Annarita Magri.
Pakutanga kuona, meseji dzingaite sedzakadzokororwa (pomero zvakare inowanzoitirwa avo vari muMedjugorje) maererano nekusimbisa kwavo kwakaringana pane mamwe madingindira epakati: kukosha kwekupa hupenyu hwako hwese kuna Mwari, kutendeka kuMagisterium echokwadi eChechi, kukosha kwemunamato, Magwaro uye Yukaristiya. Zvisinei, kana ichitariswa kwenguva yakareba, mameseji eAnguera anobata pazvinhu zvakasiyana siyana zvisina chinhu chisingapindirani nedzidziso dzeChechi kana zvakazarurwa zvakavanzika.
Nzvimbo yeChechi yakanangana neAnguera apparitions inonzwisisika ndeyambiro; sezvakaitwa neZaro di Ischia, komisheni yakavambwa nechinangwa chekuongorora. Nekudaro, zvinofanirwa kutaurwa kuti chinzvimbo cheMsgr. Zanoni, Archbishop wavazvino we Feira de Santana, nebasa reDiocesan raAnguera, anotsigira zvakanyanya, sezvatinoona kubva muhurukuro pfupi iyi (muchiPutukezi nemusoro-weChitungwiza madiki): Click pano
Uye Archbishop Zanoni vaonekera pachena muAnguera padhuze naPedro Regis, uye vachirumbidza vafambi.
Zvinofanira kunge zviri pachena kuti zvirimo mumessage izvi hazvigone kuve nedhimoni mavambo nekuda kwedzidziso yavo yakasimba yedzidziso. Ichokwadi kuti François-Marie Dermine ane mukurumbira wekuCanada akapomera Pedro Regis munhepfenyuro yeItaly Katurike yekugamuchira meseji ne "otomatiki kunyora." Muoni, iye pachake, akaramba pfungwa iyi zvakananga uye zvinogutsa (tinya pano. Kuti utarise Pedro achigovana Mikova yaakatambira, tinya pano.
Paunenge uchiongororwa mafungiro aFr. Tsvina neruremekedzo kumubvunzo wakasarudzika wezuva razvino rekuzivisa a priori kupokana nechero chiporofita (senge zvakanyorwa naFr. Stefano Gobbi) uye dzinoona kuuya kweNguva yeRunyararo maonero ehunyengeri. Nezve mukana wekuti Pedro Regis angadai akagadzira angangoita zviuru zvishanu mameseji kwenguva ingangoita makore makumi matatu nematatu, inofanirwa kubvunzwa kuti ndezvipi zvinokurudzira zvaangave nazvo kuita kudaro. Kunyanya, Pedro Regis angadai akafungidzira sei iwo wakawandisa meseji # 5000, iyo yaakatambira pachena apo akapfugama kwemaawa angangoita maviri muna Mbudzi 33, 458? Uye angave akainyora sei pasi pamashizha anopfuura zana emapepa akaverengerwa kumberi, neshoko richimira zvakaringana pakupera kwepeji 2? Pedro Regis, iye pachake, aive asingazivewo zvinorehwa nemamwe mazwi ezvechitendero anoshandiswa mushoko. Zvinofungidzirwa kuti kwakapoteredza zvapupu mazana masere, kusanganisira vatori venhau veTV, nekuti Mukadzi Wedu weAnguera akavimbisa zuva rapfuura kuti ape "chiratidzo" kune vasina chokwadi.
Sei Muranda waMwari Luisa Piccarreta?
Avo avo vasati vanzwa kusuma kwakakodzera kwezvakazarurwa pane zve "Chipo Chokurarama Mukuda kwaMwari," izvo Jesu akapa kuna Luisa dzimwe nguva vanoshamiswa nekushingairira kunoitwa nevaya vane ichi chisumo: "Nei zvakanyanya kusimbisa "mukadzi wemunhu akaderera kubva kuItaly akafa makore anopfuura makumi manomwe apfuura?"
Kunyangwe iwe uchiwana sumo yakadaro mumabhuku, Korona Ye Nhoroondo, Korona yehutsvene, Zuva reKuda Kwangu (rakaburitswa neVictoria pachayo), Chinongedzo kuBhuku reDenga (iyo inotakura imprimatur), pfupiso pfupi yaMark Mallett PaLuisa uye Zvinyorwa zvake, mabasa aFr. Joseph Iannuzzi, uye zvimwe zviwanikwa, ndapota tibvumireiwo, mumisongo mishoma, kuti tikwanise kupedzisa kushushikana.
Luisa akazvarwa musi waApril 23, 1865 (Svondo yakaziviswa naSt. John Paul II sezuva reMutambo weTsitsi dzaMwari Svondo, maererano nechikumbiro chaIshe muzvinyorwa zveSt. Faustina). Aive mumwe wevanasikana vashanu vaigara mutaundi diki reCorato, Italy.
Kubva pamakore ake ekutanga, Luisa akatambudzwa nadhiyabhorosi uyo akazviratidza kwaari muzviroto zvinotyisa. Nekuda kweizvozvo, akapedza maawa akawanda achinamata Rosary uye achikumbira kuchengetedzwa yevatsvene. Yakanga isiri iyo kusvikira ave “Mwanasikana waMaria” apo hope dzinotyisa dzakazoguma pazera regumi nerimwe. Mugore rakatevera, Jesu akatanga kutaura zvemukati kwaari kunyanya mushure mekugamuchira Chirairo Chitsvene. Paaive nemakore gumi nematatu, Akazviratidza kwaari muchiratidzo chaakaona kubva kubharanda remba yake. Ikoko, mumugwagwa wezasi, iye akaona boka remauto nemasoja akatakura zvombo achitungamira vasungwa vatatu; akaziva Jesu semumwe wavo. Paakasvika pasi pevharanda rake, Akasimudza musoro wake ndokudaidzira achiti: “Mweya, ndibatsire! ” Akarwadziwa kwazvo, Luisa akazvipa kubva musi iwoyo semweya werufu kuripira zvivi zvevanhu.
Pakati pezera regumi nemana, Luisa akatanga kuona zviratidzo uye kuoneka kwaJesu naMaria pamwe nekutambura kwemuviri. Pane imwe nhambo, Jesu akaisa korona yeminzwa pamusoro wake ichimuita kuti atadze kuziva uye kukwanisa kudya kwemazuva maviri kana matatu. Izvi zvakava chinhu chinoshamisa apo Luisa akatanga kugara paEucharist ari ega "chingwa chezuva nezuva." Pese paakamanikidzwa pasi pekuteerera nemureururi wake kuti adye, aisatombokwanisa kugaya chikafu, icho chakazobuda maminetsi gare gare, chisina kusimba uye chitsva, sekunge chakange chisati chambodyiwa.
Nekuda kwekunyadziswa kwake pamberi pemhuri yake, iyo yaisanzwisisa chikonzero chekutambudzika kwake, Luisa akakumbira Ishe kuti vavanze miedzo iyi kune vamwe. Jesu akabva amupa chikumbiro chake nekubvumira muviri wake kutora kusafamba, kuomarara-senge mamiriro akaonekwa senge anga afa. Paingova chete apo mupristi paakaita chiratidzo cheMuchinjikwa pamusoro pemuviri wake ndipo Luisa akawanazve hunyanzvi hwake. Aya mamiriro anoshamisa asingazivikanwe akaramba aripo kusvika parufu rwake muna 1947 - yakazoteverwa nemariro yanga isiri nyaya diki. Munguva iyoyo muhupenyu hwake, haana kana chirwere chemuviri (kudzamara abatwa nemabayo pamagumo) uye haana kuzomborwara nemubhedha, kunyangwe akavharirwa pamubhedha wake mudiki kwemakore makumi matanhatu nemana.
Seizvo zvakazarurwa zvinoshamisa pane Divine Divine akapiwa naJesu kuSt Faustina constitute Kuedza kwekupedzisira kwaMwari kuponesa (pamberi pekuuya kwake kwechipiri munyasha), zvakadarowo Zvizaruro zvake pamusoro peKuda kwaMwari zvakapihwa kuMuranda waMwari Luisa Piccarreta constitute Kuedza kwaMwari kwekupedzisira kwekutsveneswa. Kuponeswa nekutsveneswa: izvo zviviri zvekupedzisira zvido izvo Mwari ane kuvana Vaanoda. Iyo yekutanga ndiyo nheyo yekupedzisira; nokudaro, zvakakodzera kuti zvakazaridzwa naFaustina zvive zvakatanga kuzivikanwa; asi, pakupedzisira, Mwari haadi kuti isu tigamuchire ngoni Hwake, asi kuti isu tinogashira Hupenyu Hwake sehupenyu hwedu uye nekudaro tifanane saIye - zvakanyanya sezvinobvira kune chisikwa. Ndichiri zvakazaridzwa zvaFaustina, ivo pachavo, vanogara vachitaura nezvehutsvene uhu hweKurarama muKuda kwaMwari (sezvinoita zvakazarurirwa zvimwewo zvakawanda zvakavanzika zveiyo makumi mavirith zana), rakasiiwa kuLuisa kuti rive gurukota rekutanga uye "munyori" we "hutsva hutsva hutsva" uhwu (sokudanwa kwaiitwa naPapa St. John Paul II).
Kunyange zvakazaruro zvaLuisa zvichizadzika kana chiitiko (Chechi yakaramba ichisimbisa izvi uye nenzira dzakawanda dzakatobvumidzwa), zvakadaro vanopa izvo, pachena, meseji inoshamisa kwazvo inogona kufungwa nemunhu. Mharidzo yavo inotemesa pfungwa zvekuti kusahadzika mukati mavo kungave kuri kuyedza, asi nekuda kweizvozvo hapana zvikonzero zvine musoro zvinosara kusava nechokwadi kwakadaro. Uye meseji ndeiyi: mushure memazana mana emakore gadziriro mukati menyaya yekuponeswa uye zviuru zviviri zvemakore zvekuwedzera kuputika kugadzirira mukati meChechi nhoroondo, Chechi iri pakupedzisira kugamuchira korona yake; akagadzirira kugashira izvo izvo Mweya Mutsvene waanga uchimutungamidza nguva yese. Hapachina mumwe kunze kwoutsvene chaihwo hweEdheni pachako-hutsvene hwakawanikwa naMariya, nenzira yakakwana kwazvo kupfuura kunyange Adhama naEvha-uye ikozvino yave kuwanikwa yekubvunza. Utsvene uhwu hunodaidzwa kuti "Kurarama muKuda kwaMwari." Iyo inyasha dzekwekwe. Uku ndiko kuzadziswa kwemunamato wa “Baba vedu” mumweya, kuti Kuda kwaMwari kuitwe mauri sekuita kwevatsvene vari Kudenga. Hazviratidze chero zvipi zvapo zvekunamata nezviito izvo zveDenga zvanga zvichikumbira kwatiri-kugara tichiita maSakramente, tichinamata Rosary, tichitsanya, tichiverenga Rugwaro, tichizvitsaura kunaMariya, tichiita mabasa entsitsi, nezvimwewo. inodaidzira ichikurumidza uye yakakwidziridzwa, nekuti ikozvino tinogona kuita zvinhu izvi zvese nenzira yakagovaniswa zvechokwadi.
Asi Jesu akaudzawo Luisa kuti haagutsikane nemweya mishoma pano uye nekugara hutsvene uhu. Ari kuzounza kutonga kwawo pamusoro penyika yose mune rinosvikira Runyararo Era Renyika Dzese. Izvo chete ndizvo zvichaita kuti "Baba Vedu" munyengetero uzadzikiswe zvechokwadi; uye munamato uyu, iwo munamato mukuru pane wakambonyengetera, chiporofita chechokwadi chakataurwa nemiromo yeMwanakomana waMwari. Humambo hwake huchauya. Hapana uye hapana angazvimise. Asi, kubudikidza naLuisa, Jesu ari kukumbira isu tese kuti tive ivo kuzivisa iyi Humambo; kudzidza zvakawanda nezve Kuda kwaMwari (sezvo Iye Akazivisa Zvakadzika kwazvo kuna Luisa); kurarama mukuda kwake isu pachedu uye ndokugadzirira gasi kutonga kwaro kwese; kumupa iye zvido zvedu kuti atipe ake ake.
“Jesu, ndinovimba nemi. Kuda Kwako ngakuitwe. Ndinokupa kuda kwangu; ndokumbirawo undipe zvako. "
“Umambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe pasi pano sezvinoitwa kudenga. ”
Aya ndiwo mazwi ayo Jesu ari kukumbira isu kuti tigare tine mupfungwa, nemoyo, nemiromo.
Nei Simona naAngela?
Zviono zveMukadzi wedu weZaro
Iwo mafungidziro ekuti Marian muZaro di Ischia (chitsuwa chiri padyo neNaples muItari) anga achienderera kubva 1994. Vaviri vazvino vanoona, Simona Patalano naAngela Fabiani, vanogamuchira mameseji musi wa8 na26 wemwedzi wega wega, uye Don Ciro Vespoli, uyo inopa hutungamiri hwemweya kwavari, iye pachake aive mumwe weboka revaoni panguva yekutanga chikamu chemashura, asati ava mupristi. (Ndi Don Ciro uyo, zvirinani kusvika nguva pfupi yadarika, angaverenga mameseji akanyorwa naSimona naAngela mushure mekunge vabuda mumafaro avo anofungidzirwa kana "kuzorora muMweya--riposo nello Ghosto").
Iwo mameseji kubva kuWedu Mukadzi weZaro anogona kunge asiri kunyatso zivikanwa munyika inotaura Chirungu, asi nyaya inogona kuitirwa yekuvarapa zvakakomba pane zvinoverengeka zvikonzero. Chekutanga ndechekuti vatungamiriri ve diocesan vari kunyatsovadzidza uye muna 2014 vakamisa komisheni yakagadziriswa basa, pakati pezvimwe zvinhu, nekuunganidza ufakazi hwekuporesa uye zvimwe michero zvine chekuita nemaapparitions. Vanoratidzira nemaapparitions avo, saka, vari pasi pekuongororwa kwakanyanya, uye paruzivo rwedu, pakange pasina zvipomerwa zvekukanganisa. Don Ciro, iye amene, akataura kuti aigona kunge asina kuve akagadzwa naMisgr. Filippo Strofaldi, anga achitevera maapparitions kubva muna1999, aive nemonignor akatonga maapparitions kungave a diabolic kana mhedzisiro yechirwere chepfungwa. Chinhu chechitatu pakufarira kutora iyo Zaro apparitions / mameseji zvakanyanya chiratidzo chakajeka chekuti muna 1995, vaiona vane izvo zvinoita sekunge chiratidzo chekuziva (chakaburitswa mumagazini. Epoch) yekuparadzwa kwe2001win kweTwin Towers * muNew York. (Ndicho ichi chakakwezva kutariswa kwenhau dzenyika kuZaro). Nezve izvo zvinowanzo fungisisa zvemeseji, ** pane kusangana kunoshamisa pakati pavo nezvimwe zvakakomba masosi, pasina zvikanganiso zvedzidziso.
Vhidhiyo yakanyorwa (Italian) inosanganisira chakavanzika 1995 mutsara wevaoni (pakati pavo Ciro Vespoli):
Don Ciro Vespoli aive mumwe weboka revatambi sevachiri kuyaruka, uye akazova mupristi. Iye haachagari pedyo neZaro asi anogashira uye anoregedza mameseji.
Nyaya yaValeria yaCopponi yekugamuchira magariro kubva kudenga yakatanga paakange ari muLourdes achiperekedza murume wake wemauto parwendo. Ikoko akanzwa izwi raakaratidza kunge ngirozi yake inomuchengeta, richimuudza kuti amuke. Akazomupa kuna Mukadzi Wedu, uyo akati, "Iwe uchave wangu cenacle" - izwi raakangonzwisisa makore akazotevera apo mupirisita akarishandisa muchikamu cheboka reminamato raakatanga muguta rekumusha reRome, Italy. Iyi misangano, iyo iyo Valeria yaiendesa mameseji ake, yaitanga kuitirwa kaviri pamwedzi neChitatu, uye vhiki nevhiki pakukumbira kwaJesu, uyo waanoti iye akaona kuchechi yeSant'Ignazio maererano nemusangano neAmerican Jesuit, Fr. Robert Faricy. Kudanwa kwaValeria kwakasimbiswa nekuporesa kunoshamisa, kusanganisira imwe kubva ku multiple sclerosis, iyo yaisanganisirawo mvura inoshamisa paCollevalenza, iyo 'Italian Lourdes' uye kumba kuimba yechiSpanish, Amai Speranza di Gesù (1893-1983), parizvino iri kurova.
Aive Fr. Gabriele Amorth uyo akakurudzira Valeria kuti aparadzire mameseji ake kunze kwekunamatira cenacle. Hunhu hwevafundisi hwakasanganiswa nenzira inofungidzirwa: vamwe vafundisi vanokakavara, nepo vamwe vachipinda zvizere mukenenzi.
The zvinotevera anobva kuValeria Copponi mazwi ake, sezvavanotsanangurwa pawebhusaiti yake uye zvakashandurwa kubva kuItari: http://gesu-maria.net/. Imwe shanduro yeChirungu inogona kuwanikwa panzvimbo yake yeChirungu pano: http://keepwatchwithme.org/?p=22
“Ndiri chishandiso chinoshandiswa naJesu kutiita kuti isu tinzwe kuravira Shoko rake nguva dzatiri. Ndichiri ndisina kukodzera izvi, ndinogamuchira nekutya kukuru uye nemutoro chipo chikuru ichi, ndichizvipa zvakakwana kuna Kuda kwake. Ichi chinoshamisa charism chinonzi "nzvimbo". Izvi zvinosanganisira mazwi emukati anouya, kwete kubva mundangariro muchimiro chendangariro, asi zvichibva pamoyo, sekunge izwi "raitaura" kubva mukati.
Kana ini ndatanga kunyora (ngatiti, pasi pekutaurira), handisi kuziva nezve pfungwa yeiyo yese. Chete pakupedzisira, pandinoverenga zvekare, ndinonzwisisa zvinorehwa neshoko rose rekuti "kutemerwa" kwandiri zvakanyanya kana zvakaderera mumutauro wezvebhaibheri wandisinganzwisisi. Pakutanga, chinhu icho ini vakashamiswa kunyanya kwaive kuri kwe “kuchena” kunyora pasina kubviswa kana kugadziridzwa, kwakanyatso uye zvakanyatsojeka kupfuura kwekuudzwa kwakajairwa, pasina kupera simba pandiri; zvese zvinobuda zvakanaka. Asi tinoziva kuti mweya unovhuvhuta kwaanoda uye kupi, uye nekuzvininipisa kukuru uye nekubvuma kuti pasina Iye hapana chatingaite, tinozvipa isu tega kuti titeerere kuIzwi, Ndiani nzira, Chokwadi, neHupenyu.